Burma Democratic Concern (BDC) Diary (14 Dec 2010)
မန်မာလူထု နိုင်ငံရေး နိုးကြားမှု တိုးလာ၊ ဒေါ်စု ရှုမြင်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေဟာ လတ်တလော အပြောင်းအလဲတွေ ပေါ်မလာနိုင်ဘူး ဆိုရင်တောင် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကာလ နောက်ပိုင်း လူထုရဲ့ နိုင်ငံရေး နိုးကြားမှုဟာ မြင့်မားလာခဲ့ပြီး ဒီနိုးကြားမှုဟာ အပြောင်းအလဲတွေ ပေါ်လာဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လတ်တလော အခြေအနေနဲ့ နိုင်ငံရေး အလားအလာကို ဗွီအိုအေ သတင်းထောက်တဦးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားတာတွေကို ကိုသိန်းထိုက်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
“အရင်က လူတော်တော်များများက နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် စိတ်ဝင်စားမှု သိပ်မရှိခဲ့ပါဘူးလို့ ကျမထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သံဃာတော်တွေ အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းခံခဲ့ရတာကို ကြည့်ပြီး တော်တော်လေး အံ့အားသင့် တုန်လှုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို လျစ်လျူရှုထားလို့ မရတော့ဘူးဆိုတာ မြင်လာကြပါတယ်။”
“လူငယ်တွေ တော်တော်များများ တိုင်းပြည်အပြင်ကို ထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက် ကျန်နေတဲ့ လူငယ်တွေက တာဝန်တွေ မယူနိုင်ဘူး၊ ယူနိုင်တဲ့ အရည်အချင်း မရှိဘူးဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုဆိုရင် ပြည်တွင်းမှာ လေ့လာချင်တဲ့၊ သတိထား စောင့်ကြည့်နေသူတွေ ရှိပါတယ်။
“ပြည်တွင်းက လူငယ်တွေဟာ အပြင်မှာ ရောက်နေတဲ့ သူတွေလောက် အခွင့်အလမ်းတွေ မရတဲ့အတွက် ပြည်ပက လူငယ်တွေလောက် မသိတာတွေ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့မှာ လေ့လာသင်ယူချင်တဲ့ စိတ်တွေ ပြင်းပြနေကြပါတယ်။
“ပညာအတတ်ဆုံးသူတွေ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ တိုင်းပြည်ကနေ ထွက်သွားကြပေမဲ့ ကျန်နေတဲ့ အဲဒီ လူငယ်တွေနဲ့ လက်တွဲပြီး ကျမတို့ ဆက်အလုပ်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ တော်တော်များများက နိုင်ငံခြားမှာ အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုရတယ်ဆိုပြီး ထွက်သွားကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒီလို အခွင့်အလမ်းတွေ အပြင်မှာ ပိုရမယ်ဆိုတာ သိရက်နဲ့ ပြည်တွင်းမှာပဲ နေပြီး တခုခု ကောင်းအောင် လုပ်နေတဲ့ လူငယ်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။”
၂၀၀၇ ခုနှစ်ကတည်းက သိမ်းဆည်းခံထားရတဲ့ အောင်လံက လယ်သမား ၁၀ ဦးရဲ့ လယ်ယာမြေတွေကို ဒီကနေ့ထိ ပြန်မရသေးတဲ့အတွက် အိုင်အယ်အို အနေနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေနဲ့ ထပ်မံညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အောင်လံသမားတွေက ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက် ဒီကနေ့ ရန်ကုန် အိုင်အယ်အိုရုံးမှာ တိုင်ကြားလိုက်ပါတယ်။
စစ်အစိုးရ၏ သကြားစက်အတွက် တောင်သူများကို အဓမ္မ ကြံစိုက်ခိုင်းပြီး မစိုက်သူများ၏ လယ်ယာမြေများကို ဘူဒိုဇာဖြင့် ထိုးကော် ဖျက်ဆီးသဖြင့် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် (ILO) ကို တိုင်ကြားခြင်း ဖြစ်သည်။ (Photo: AFP)
ဒီကနေ့ နေ့လည် ၁ နာရီလောက်က အောင်လံ လယ်သိမ်းခံ လယ်သမား ၁၀ ဦးရဲ့ ကိုယ်စား လယ်သမား ဦးသန်းစိုးက ရန်ကုန် အိုင်အယ်အိုရုံးကို လာရောက်ပြီး အိုင်အယ်အို အရာရှိ မစ္စတာ စတိဗ် မာရှယ်ကို တွေ့ဆုံ အကူအညီ တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ အိုင်အယ်အိုအကြား နားလည်မှု စာချွန်လွှာကို နှစ်စဉ် သက်တမ်းတိုး သဘောတူ ထားပေမဲ့ စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေက လိုက်နာခြင်း မရှိတဲ့အတွက် အဓမ္မခိုင်းစေမှုတွေ ဆက်ခံနေရသလို လယ်ယာမြေတွေလည်း ဆုံးရှုံးနေရဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဦးသန်းစိုးက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ILO နဲ့ အစိုးရနဲ့ နားလည်မှု စာချွန်လွှာတွေကို တနှစ်ပြီး တနှစ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပေမဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတောင်မှ ဒီနေ့ထက်ထိ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှ ခံစားခွင့် မရဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ အဓမ္မ ခိုင်းစေခံရတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ လယ်ယာမြေတွေကို ငြင်းဆန်တဲ့အတွက် ပြစ်ဒဏ်အဖြစ် အသိမ်းခံရတယ်။ ဒါတွေဟာလည်းပဲ အစိုးရနဲ့ ILO နဲ့ကြားမှာ ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ် ပြီးပါလျက်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ထက်ထိ ဆုံးရှုံးနေဆဲပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဘဝတွေဟာ လယ်မဲ့ယာမဲ့ ဖြစ်နေဆဲပဲ။”
၂၀၀၇ ခုနှစ်က အမှတ် ၅ သကြားစက်ရုံမှူးနဲ့ မြိုနယ် မယက ဥက္ကဋ္ဌတို့ကနေ ဦးသန်းစိုးအပါအဝင် လယ်သမား ၁၀ ဦးထံကနေ စီမံကိန်းသီးနှံ ကြံ စိုက်ပျိုးခိုင်းတာကို မစိုက်တဲ့အတွက်ဆိုကာ လယ်ယာမြေဧက ၇၀ ကျော်ကို သိမ်းယူပီး အခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအမှုကိစ္စကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ အိုင်အယ်အို တိုင်ကြားခဲ့တဲ့အတွက် အိုင်အယ်အို အရာရှိ မစ္စတာ စတိဗ် မာရှယ်နဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရ အရာရှိ ဗိုလ်မှူးကြီး ယုနွယ်အောင်တို့ ဆွေးနွေးသဘောတူချက်အရ လယ်ယာမြေတွေကို လယ်သမားတွေထံ ပြန်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို အောက်ခြေမြို့နယ်နဲ့ ခရိုင်အဆင့် အာဏာပိုင်တွေက ဒီကနေ့အထိ လိုက်နာ အကောင်အထည် ဖော်ခြင်း မရှိတဲ့အတွက် အခုအထိ လယ်ယာမြေတွေ ပြန်မရသေးပဲ ဆုံးရှုံးနေရတဲ့အတွက် အခုလို အိုင်အယ်အိုကို ထပ်မံ အကူအညီ တောင်းခံရတာ ဖြစ်ကြောင်း ဦးသန်းစိုးက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
By ဦးဇော်ဝင်းလှိုင် တနင်္လာ, 13 ဒီဇင်ဘာ 2010
ပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံက ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု တိုးလာပြီး ပြည်တွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှုနှုန်း ဟာလည်း မြင့်တက်လာတာကို တွေ့ရတယ်လို့ နှစ်စဉ်ထုတ်ဝေတဲ့ UNODC ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ရာဇ၀တ်မှု နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာ အသစ်က ပြောပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်က မြန်မာပြည်တွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု လျော့ကျနေခဲ့ရာက ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်အတွင်းမှာ ပြန်များလာတာကို တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုလို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်သုံးစွဲမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစီရင်ခံစာသစ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်များ အသင်းမှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ကိုယ်တိုင် သတင်းသွားယူထားတဲ့ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
အခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမ်ဖက်တမင်း (Amphetamine) လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ကြွဆေး ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း ပိုများလာတာကို တွေ့ရပြီး အထူးသဖြင့်တော့ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုနှုန်းဟာ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာတာကို တွေ့ရတယ်လို့ UNODC ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ရာဇ၀တ်မှု တိုက်ဖျက်ရေးရုံးရဲ့ အရှေ့အာရှဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် ဂယ်ရီ လူးဝစ်စ် (Gary Lewis) က အခုလို ပြောသွားပါတယ်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်၊ ၂ နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုနှုန်းဟာ ၂ ဆနီးပါးလောက် မြင့်တက်လာတယ် ဆိုတာကို စစ်တမ်းတွေအရ တွက်ချက်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ဒါဟာ သိသာလွန်းတဲ့ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပြီး တခြား မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ သုံးစွဲမှုတွေဟာလည်း မြင့်တက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု မြင့်တက်လာပြီး အထွက်နှုန်းကလည်း အားကောင်းလာတာကြောင့် တကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ နှုန်းယှဉ်လိုက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံက ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းဟာ ၁၆% လောက် မြင့်တက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။”
တဘက်မှာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုနှုန်း အခုတနှစ်အတွင်း မြင့်တက်လာသလို တခြား မက်သမ်ဖက်တမင်း (Methamphetamine) လို မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်မှုတွေလည်း ၁၄% လောက်အထိ တိုးမြင့် ထုတ်လုပ်လာတာကို တွေ့ရတယ်လို့ UNODC အရှေ့အာရှဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရေး တာဝန်ခံ မစ်စ် ဒီပီကာ နာရူကာ (Ms. Deepika Naruka) က ပြောပါတယ်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းအတွင်းကနေ အခုနှစ်ဆန်းပိုင်းအထိ မြန်မာနိုင်ငံက မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်မှုဟာ ၅% လောက်သာ ရှိခဲ့ပေမဲ့ အဲဒီကိန်းဂဏန်းတွေဟာ မကြာခင်မှာ ပြောင်းလဲတော့မှာပါ။ အခုနှစ်အတွင်းမှာတင် ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းဟာ ၁၄% အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ မက်သမ်ဖက်တမင်း မူးယစ်ဆေးပြားတွေ အများဆုံး ထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံတခု ဖြစ်လာတယ် ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားစရာ တွေ့လာရပါတယ်။”
အဲဒီ မက်သမ်ဖက်တမင်း ဆေးပြားတွေကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်လောက်က စတင် ဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ ဆေးပြား အရေအတွက်ဟာ ၂၄,၀၀၀,၀၀၀ လောက် ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က ဖမ်းမိခဲ့တဲ့ ဆေးပြားအရေအတွက် ၁,၇၀၀,၀၀၀၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ဖမ်းမိတဲ့ ၁,၀၀၀,၀၀၀ သာသာ အရေအတွက်တို့နဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင် သိသိသာသာ ခုန်တက်လာတာကြောင့် ကုလသမဂ္ဂအတွက် အထူးစိုးရိမ်စရာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့ အစောပိုင်း ရရှိထားတဲ့ စာရင်းတွေ အရတော့ အခုနှစ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ၁,၇၀၀,၀၀၀ လောက် ဖမ်းမိထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ကုလသမဂ္ဂ အနေနဲ့ ဒေသခံအစိုးရ အပါအ၀င် ကျေးရွာလူကြီးတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဘိန်းအဓိက စိုက်ပျိုးတဲ့ ရှမ်းပြည်အတွင်းမှာ ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်တွေကို စတင် လုပ်ဆောင်နေပြီလို့ UNODC ရန်ကုန်ဌာနေကိုယ်စားလှယ် ဂျေစင် အီလိုင်ယာ (Jason Eliagh) က အခုလို ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် နှစ်အတော်ကြာ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း လိုအပ်တဲ့ စီမံကိန်းတွေ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်အောင် နောက်ပိုင်းက ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုတွေလည်း အများအပြား လိုအပ်တဲ့အကြောင်း ထည့်သွင်း ပြောကြားသွားကြပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယား စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ထပ်မံပြုလုပ်
တောင်ကိုရီးယား ရေတပ် တပ်ဖွဲ့တွေဟာ တကယ့်ကျည်တွေ သုံးပြီး ပစ်ခတ်တဲ့ စစ်ရေး လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ဒုတိယပတ်အဖြစ် ဒီနေ့ စလုပ်နေပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ကမ်းခြေ ဒေသတွေမှာ လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားဘက်က ဒီလို စစ်ရေး လေ့ကျင့်ခန်းတွေကြောင့် နျူကလီးယားစစ်ပွဲ ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်လို့ သတိပေးထားတာကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ဆက်လုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တာမို့ တောင်ကိုရီးယား အစိုးရဟာ သူ့ပြည်သူတွေကို ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အနေနဲ့ အရပ်သားဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေး လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလည်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာလုပ်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ အဓိကကတော့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လာရင် အရပ်သားတွေ အနေနဲ့ ကတုတ်ကျင်းထဲကို အမြန်ပြေးဝင် ခိုလှုံနိုင်အောင် ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေးမှူးဟောင်း တဦးကတော့ မနေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူး တခုထဲမှာ မြောက်ကိုရီးယားဘက်က နောက်ထပ် စစ်ရေးလှုံ့ဆော် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ထပ်လုပ်လာနိုင်တယ်၊ အဲဒါကြောင့် နှစ်ဘက် အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်မှုတွေ အကန့်အသတ်နဲ့ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းပြောခဲ့ပါတယ်။
သံတမန်ရေး စာမျက်နှာမှာတော့ အမေရိကန် စစ်ရေးကိုယ်စားလှယ် တဖွဲ့ဟာ ဆိုးလ်မြို့တော်မှာ ဒီနေ့ ဆွေးနွေးပွဲတခု လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ တရုတ်ဘက်က မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ဒေသတွင်း အင်အားကြီးတဲ့ နိုင်ငံတွေကြားမှာ အရေးပေါ် ဆွေးနွေးပွဲတခု လုပ်ဖို့ ဆက်လက် ဖိအားပေးနေပါတယ်။
လက်တွေ့ပစ်ခတ်မှုလုပ်မယ့် စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကို ဒီနေ့ကနေ သောကြာနေ့အထိ ၂၇ နေရာမှာ လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ဝါ ကမ်းခြေဒေသက နေရာ ၁၅ နေရာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လက မြောက်ကိုရီးယားဘက်က လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုကြီး ပြီးကတည်းက တောင်ကိုရီးယား အစိုးရဟာ ပြန်တုံ့ပြန်ဖို့ အဆင်သင့် မဖြစ်ဘူး ဆိုပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ ဖိအားပေးတာကို ခံနေရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အခုလို စစ်ရေး လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ရုတ်တရက် ခဏခဏ လုပ်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေထဲမှာ မြောက်ကိုရီးယားကို အင်အားပြဖို့အတွက် အမေရိကန် ရေတပ်နဲ့ ပူးတွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ ရေတပ် လေ့ကျင့်ခန်းကြီး တခုလည်း ပါပါတယ်။
Monday, 13 December 2010 18:08 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း အထူးဒေသ ၄ မိုင်းလားတွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်မှစ၍ တာ့ပင်းတံတား အ၀င်အထွက် ကုန်စည် တင်ဆောင်မှုကို နအဖတို့ ပိတ်ပင် လိုက်သော် လည်း အခြေခိုင်နေပြီးသော ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် စီးပွါးရေး စနစ်ကြောင့် ထိခိုက်မှုမရှိ ကြောင်း မိုင်းလား သျှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲသွားလာခဲ့သည့် တာချီလိတ် အခြေစိုက် သျှမ်းလူငယ်တဦး ပြန်လည်ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
“ ပြီးခဲ့တဲ့လ ၂၃ ရက် ကစပြီး မိုင်းလားမြို့အ၀င် တာ့ပင်းဂိတ် ကုန်စည်အ၀င်အထွက်ကိုနအဖဖက်က လုံးဝ ပိတ်လိုက် တယ်။ ၂၆ ရက်ကျ တော့မိုင်းလားကိုသွားလည်တဲ့ ခရီးသွားဧည့်သည် (အများအားဖြင့် ထိုင်းပေါ့) တွေကိုထပ်ပိတ်လိုက် တယ် ဒီနေ့အထိဘဲ။ ဒါပေမယ့် မိုင်းလား မှာ ထိုင်းပစ္စည်းကုန်ဈေးနှုန်း အနည်းအကျဉ်း တက်တာကလွဲလို့ သူတို့အတွက် ဘာမှမထိခိုက်ပါဘူး။ သူတို့ဝင်ငွေအတွက် မက္ကနီဆီယံသတ္တုတွင်း ရှိတယ်။ ရွှေရှိတယ်။ ငှက်ပျော၊ ရာဘာစိုက်တယ်။ မော်တော်ကားခွန်ကောက်တာရှိတယ်။ ကာစီနိုလောင်းကစား ၀ိုင်းရှိတယ်။” - ဟု နိုဝင်ဘာ ၃၁ မှ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်အထိကျင်းပသော မိုင်းလားမြို့သျှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲ သွားရောက်ဆင်နွဲခဲ့သည့် အဆိုပါလူငယ်က ပြောပြသည်။
တရုတ်/ ထိုင်းမှ ၀င်သည့်ကားများထံမှ အခွန်ယူရရှိသည့်အပြင် တာ့ဆွပ်လွေကူးတို့ဆိပ် (မဲခေါင်မြစ်တွင်း စီးဝင်သည့် နမ့်လွေချောင်းဝ) မှ ၂ နာရီခရီး ကြာသော ကျိန်းခန်ရွာ၌ မက္ကနီဆီယံတူး ဖော်ကာ တာ့ဆွပ်လွေနှင့် နမ့်ပန်းကြား လမ်းခွဲမှ မြေလမ်းအတိုင်း တရုပ် ပြည်သို့ တင်ပို့ရာ တရုတ် ၆ ဘီးကားကြီးများဖြင့် ပျှမ်းမျှ တပတ်လျင် အစီးရေ ၂၀၀-၃၀၀ ခန့် အထိ ရှိသည်ဟုလည်းသိရသည်။ တာ့ဆွပ်လွေ ရွာသည်အိမ်ခြေ ၆၀ ခန့်ရှိပြီး အခါ၊ သျှမ်း၊ တရုတ်တို့နေထိုင်၏။ တာ့ဆွပ်လွေမှ မိုင်းလားအထိ တတောလုံး တတောင်လုံး ငှက်ပျောနှင့် ရာဘာပင်များ စိုက်ပျိုးကြသည်ဟု၎င်းကပြန်လည် ပြောပြသည်။
ထို့ပြင်ကျိန်ခန်တွင် သံရည်ကျိုစက်လည်း ရှိ၏။ မိုင်းယန်းအရှေ့ဖက် ဆီလူးတွင်သကြားစက်ရုံရှိပြီး တရက်လျှင် သကြားတန်ချိန်ထောင် ကျော်ထွက်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။
“ကြံကြိတ်ချိန်ဆိုရင် ပျှမ်းမျှ တရက် သကြားတန်ချိန် ၁၅၀၀ လောက်ထွက်တယ်။ ဒေသထုတ်ကုန်တွေကို တရုတ်၊ ထိုင်း၊ လောကို တင်ပို့ရောင်းချတယ်။ တာ့ပင်းဂိတ်ကုန်ကားတွေပိတ်လိုက်ပေမယ့် ဒေသတွင်း ကုန်တင်ပို့ဖို့ ကျတော့ သူ့နည်းသူ့နည်းသူ့ဟန်ရှိ တယ်။ ကားနဲ့ပို့တဲ့ အရပ်သား ကုန်သည်တွေအတွက်တော့နဲနဲ အခက်အခဲဖြစ်ရတာပေါ့ ” ဟု လည်း မိုင်းလားမှ အရာရှိ တဦးကလဲ ပြော၏။
မည်သို့ပင်ဆိုစေအထူးဒေသ ၄ မှ တခြားသို့ အလုပ်သွားလုပ်ရသော ဒေသခံ/ အလုပ်လက်မဲ့မရှိသလောက်ဖြစ်သည်ဟု လည်းပြောပြ၏။
“သူတို့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမရှိတာတောင်မှ နေ့စားအလုပ်သမားလုပ်အားခ ယွမ်ငွေ ၃၀ ကနေ ၅၀ အထိရှိတယ်။ ထိုင်းဘတ်ငွေ ၂၅၀ လောက်ကျတယ်။ ဗမာငွေဆိုရင် ၁ သောင်းနီးပါးပေါ့။ တရုတ်ကုန် အသုံးများလို့ နေထိုင်စား သောက်မှု စရိတ်လည်း မမြင့်ဘူး”- ဟု ဆို၏။
ကာစီနိုလောင်းကစားဝိုင်းမှရသည့်ဝင်ငွေအပြင် တရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်မှ ဖြတ်သန်းခ တယောက် ယွမ် ၅၀ ကိုလည်း ရရှိသေးသည်ဟု မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့အရာရှိတဦးထံမှသိရသည်။ ဆက်သွယ်ရေးအတွက် တရုတ်မှ ဖုန်းလိုင်းဝယ်ထားပြီး လျှပ်စစ်မီးအတွက် ရေအားလျှပ်စစ် များရှိသဖြင့် လုံလုံလောက်လောက်ရှိကြောင်း၊ ပို့ဆောင်ရေးအတွက်မူ ကားများမှာလည်း သူ့ဒေသနှင့်သူ အမှတ်အသား နံပါတ်များ တပ်ထားသည်ဟု သိရ၏။
“ ကားနံပါတ်က SR4- _ _ _ _ ဂဏန်း ၄ လုံး။ ပထမဆုံးဂဏန်းက ၉ ဆိုရင် အာဏာပိုင်တွေ၊ အရာရှိတွေရဲ့ကား။ ၈ ဆိုရင် နမ့်ပန်း ကကား။ ၇ ဆိုရင် ဆီလူးကား၊ ၆/၅/၄/၃/၂ /၁ နဲ့စရင် မိုင်းလားကား။ လမ်းဆိုရင်လဲ ဖြူးနေတာဘဲ။ ဒါပေမယ့် လမ်းမှာတော့ လုံခြုံရေး တော်တော်ထူထပ်တယ်” ဟု ထိုလူငယ်က ပြောသည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော အထူးဒေသ ၄ ၏ ဥက္ကဌမှာ ဦးစိုင်းလင်းဖြစ်ပြီး အတွင်းရေးမှူးမှာ စ၀်ဆိုင်လားဖြစ်၏။ဌာနပေါင်းစုံရုံး များ ကြီးကျယ် ခန်းနားလှပြီး တပ်သားသစ်တဦး၏ အခြေခံလစာမှာယွမ် ၂၃၀ မှစကာ ရာထူးအဆင့် အလိုက် အမြင့်ဆုံး လစာ ယွမ်ငွေထောင်ချီသည်ဟု သိရ၏။ အသက် ၁၈ နှစ်နှင့် ၄၀ ကြား အမျိုးသားတိုင်း စစ်မှုထမ်းရမည်ဖြစ်ပြီး စစ်မှုထမ်းကာလပြီးဆုံးသော်လည်း ရွာလုံခြုံရေးတပ်၊ မြို့လုံခြုံရေးတပ်ဟူ၍ စစ်မှုထမ်းဆောင်နေရသေးသည်ဟုဆို၏။
“အဓမ္မစစ်သားကောက်ယူတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်နဲ့ ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် စစ်မှုဝင်ထမ်းကြတယ်။ အခုနအဖနဲ့ တင်းမာ မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ဒေသခံတွေဟာ မျိုးချစ်စိတ်ပိုပြီးနိုးကြားတာတွေ့ရတယ်။ လောပန်းတွေ သူဌေးတွေလဲ စစ်တပ်တည်ဆောက်ရေး ကင်းစခန်းမွမ်းမံတည်ဆောက်ရေးတွေမှာ သုံးဖို့ဆန္ဒအလျောက်ရံပုံငွေထဲ့ဝင် ကြတယ်။ စည်းလုံးညီညွတ်ဖို့ ရပ်ရွာလူကြီးကလဲ မကြာခ ဏ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်တယ်” - ဟု ၎င်းကဆက်ပြောပြသည်။
တတိယအကြိမ် မိုင်းလား သျှမ်းနှစ်သစ် ၂၁၀၅ ကြိုဆိုသည့် နှစ်သစ်ကူးပွဲအတွက် လျာထားချက်အတိုင်းယွမ်ငွေ ၁ သန်းဝန်းကျင်(ထိုင်း ဘတ်ငွေ ၄ သန်းခန့်/ ဗမာကျပ်ငွေ သန်းပေါင်း ၁၂၀ ခန့်) ကုန်ကျခဲ့သည်ဟုဆို၏။ ပွဲတော်ကို ကျိုင်းတုံသို့အထွက်လမ်း ကွင်းပြင်၌ ကျင်းပခဲ့ပြီး တရက်လျင်လုံခြုံရေး စစ်သား အယောက် ၂၀၀ တာဝန်ယူရသည်ဟု လည်း သိရှိရသည်။
ရှမ်းပြည် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ မိုင်းလားတွင် တွေ့
Jai Wan Mai | တနင်္လာနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၃၀ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ နယ်ခြားစောင့်တပ် ပြောင်းလဲရန် ငြင်းဆန်ထားကြသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အုပ်စုများ အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ် တပ်မတော် (NDAA) ထိန်းချုပ်ရာ မိုင်းလားတွင် ယခင်အပတ် ရှမ်းနှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်တွင်း တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် နီးစပ်သော သတင်းများ အဆိုအရ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်-မြောက်ပိုင်း (SSA-N) ၏ တပ်မဟာ (၁)၊ ဝ' ပြည်သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) နှင့် မိုင်းလား အပစ်ရပ်အဖွဲ့ ထိပ်သီးကိုယ်စားလှယ်များ တံခါးပိတ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အင်အားစု အချင်းချင်း ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့် အရေးပေါ် အချိန်တွင် တဖွဲ့နှင့် တဖွဲ့ အကူအညီပေးရန် ဆွေးနွေးခြင်းဟု ဆိုသည်။
မြန်မာစစ်တပ်က ကိုးကန့်ကို ၂ဝဝ၉ တွင် စစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် ဤလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ ပိုမို ပူးပေါင်းလာကြပြီး မဟာမိတ် ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်လည်း ပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်နေ NDAA အဖွဲ့ဝင်တဦးက “တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ် အုပ်စုအနေနဲ့ ကိုးကန့်တွေရဲ့ ရှုံးနိမ့်မှုကနေ သင်ခန်းစာ ကြီးကြီးရလိုက်ပါပြီ။ နောက်ထပ် ဒုတိယအမှား ထပ်လုပ်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး” ဟု ဆိုသည်။
ထို့ပြင် SSA-N သည် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အင်အားစု အချင်းချင်း ပိုမို ထိရောက်စွာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မိုင်းလားတွင် ရုံးတခု ဖွင့်လှစ် လိုက်သည်ဟုလည်း ဒေသခံ ကုန်သည် တဦးက ဆိုသည်။
မယ်ဆိုင်မှ NDAA အငြိမ်းစားအရာရှိ တဦးက “တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက်မှာ ရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ကူညီမှုကို ပါးပါးလေး မှီခိုနေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်က ကူညီသည် ဖြစ်စေ၊ မကူညီသည် ဖြစ်စေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေကတော့ ရှေ့ဆက် ချီတက် နေမှာပါ” ဟုဆိုသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများကို မြန်မာစစ်တပ် လက်အောက်ခံ နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေး ညွှန်ကြားသည့် အချိန်မှ စ၍ အပစ်ရပ် အုပ်စုများနှင့် မြန်မာ စစ်တပ် အကြား တင်းမာမှုများ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ၂ဝ၁ဝ ဧပြီတွင်ရှမ်းပြည်တပ်မတော်-မြောက်ပိုင်း (SSA-N)
၏ တပ်မဟာ (၃) နှင့် (၇) တို့ စစ်အစိုးရ လက်အောက်ခံ ပြည်သူ့စစ် အသွင်ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။
စက်တင်ဘာနှင့် နိုဝင်ဘာလအတွင်းက မြန်မာစစ်တပ်က ရှမ်းပြည် တပ်မတော်-မြောက်ပိုင်း တပ်မဟာ (၁) ကို အသေးစား စစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယရာဇ၀တ်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရို၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို ပါကစ္စတန် ဟက်ကာများ ၀င်ရောက် နှောင့်ယှက်
ပါကစ္စတန် ဆိုက်ဘာစစ်တပ် ဟု အမည်ရသည့် အဖွဲ့တစ်ခုသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဗဟိုအစိုးရ ရာဇ၀တ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဗျူရို ၀က်ဘ်ဆိုက်သို့ ၀င်ရောက် နှောင့်ယှက်ခဲ့ပြီး အိန္ဒိယ ဟက်ကာများကို သတိပေးချက် ထားရှိခဲ့ကြောင်း Press Trust သတင်းစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် ပါကစ္စတန် ဆိုက်ဘာ စစ်တပ် အဖွဲ့သည် အဆိုပါ ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀င်ရောက်နှောင့်ယှက်ပြီး ၀က်ဘ်ဆိုက် ပိတ်ရမည့်နေ့ကို သတိပေးချက် ထားရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။အဆိုပါ အဖွဲ့သည် အိန္ဒိယ၀က်ဘ် ဆိုက်များကိုလည်း အစုလိုက် ဖျက်ဆီးမှုများ လုပ်နိုင်သည်ဟု သတိပေးခဲ့ကြောင်း Press Trust တွင် ဖော်ပြချက်အရ သိရှိရသည်။
''ဗဟို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရို CIB က သူတို့ရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက် နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ အမှုကို မှတ်တမ်း တင်ထားခဲ့တယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့် စီအိုင်ဘီရဲ့ တရားဝင် ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေကို တရားမ၀င် ၀င်ရောက်နိုင်ပြီး ဖျက်ဆီးနိုင်တယ် ဆိုတာကို သတိပြုမိခဲ့တယ်''ဟု စီအိုင်ဘီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တောင်အာရှ အိမ်နီးချင်းဖြစ်သည့် အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတို့သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့ပြီးနောက် စစ်သုံးကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ နျူကလီးယားလက်နက် ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည့် အိန္ဒိယနှင့် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတို့သည် ၎င်းတို့၏ ဆက်ဆံရေး တင်းမာမှု အခြေအနေများကို ပြုပြင်ရန် အားထုတ်ခဲ့သော်လည်း မွမ်ဘိုင်း တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေးမှာ ပျက်ပြယ်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယ အစိုးရအဖွဲ့သည် တရုတ်ဟက်ကာများဟု သံသယရှိသည့် အဖွဲ့က ၎င်းတို့၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်များကို ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ခံမှုများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကို တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
အစိုးရအဖွဲ့သည် နိုင်ငံ၏ အန္တရာယ်များသည့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအရ ဆက်သွယ်မှုများကို စောင့်မကြည့်နိုင်မည် စိုးသောကြောင့် BlackBerry သုတေသနမှ ကမ်းလှမ်းသည့် ၀န်ဆောင်မှုအချို့ကို ပိတ်ခိုင်းမည့် အလားအလာရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ရုရှား သူလျှိုလေယာဉ်များ တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် အမေရိကန်-ဂျပန် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ခေတ္တရပ်ဆိုင်း
ဂျပန်ပင်လယ်ပေါ်တွင် ရုရှားသူလျှိုလေယာဉ်နှစ်စီးကို စစ်ဆေး တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် အမေရိကန်-ဂျပန် ပူးတွဲ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့တွင် ခေတ္တရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည်ဟု ဂျပန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းရင်းမြစ်များက ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတစ်ဝန်း ပူးတွဲ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် နိုတိုကျွန်းဆွယ်တွင် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် ထောက်လှမ်းခြင်း လေ့ကျင့်မှုကို ဂျပန် Self-Defense Force နှင့် အမေရိကန် တပ်များက ပြုလုပ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ရုရှား သူလျှိုလေယာဉ်များသည် ယင်း စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်နေသော နေရာအပေါ်မှနေ၍ မြောက်မှတောင်သို့ ပျံသန်းကာ နာရီအနည်းငယ်ခန့်အကြာ ဂျပန်ပင်လယ်ပေါ်မှ ပျံသန်းခဲ့သည်။ ဂျပန်လေတပ် ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များက အလျင်အမြန် လှုပ်ရှားခဲ့ကြသော်လည်း ရုရှားလေယာဉ်များသည် ဂျပန်လေပိုင်နက်သို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအချိန်တွင် ဂျပန်ကာကွယ်ရေးတပ်၏ မိုင်ဇူရူ မရိန်းအခြေစိုက်စခန်းတွင် ဂျပန်နှင့်အမေရိကန်တို့၏ Aegis တိုက်ခိုက်ရေးစနစ်များ တပ်ဆင်ထားသော စစ်သင်္ဘောများမှာ ကျောက်ချရပ်နားနေချိန် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရုရှားလေယာဉ်များက အမေရိကန်နှင့်ဂျပန်အကြား လေကြောင်း ဆက်သွယ်မှုများကို ကြားဖြတ်နားထောင်မည် စိုး၍ လေတပ်ကာကွယ်ရေး လေ့ကျင့်မှုကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တိမ်းရှောင်နေသော ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်ကို လွှဲပြောင်းပေးရန် ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်းဆို
ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့က ဆန္ဒပြနေသော ရှပ်နီများအား တွေ့ရစဉ်
အမေရိကန် အစိုးရ လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သက်သေအထားများပေးရန် ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပြီးနောက် သက်ဆင်အား ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးရန် ထိုင်းနိုင်ငံက တောင်းဆိုခဲ့သည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်က စစ်တပ် အာဏာသိမ်းမှုဖြင့် ရာထူး ဖြုတ်ချခံခဲ့ရသည့် သက်ဆင်သည် ခြစားမှုများအတွက် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းများကို တိမ်းရှောင်ရန် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။ အစိုးရဆန့်ကျင်သည့် ရှပ်နီဆန္ဒပြမှုကို အကြမ်းဖက် နှိမ် နင်းခံရမှုများ အပါအ၀င် အခြား အကြောင်းအရာများကို သက်ဆင်က အမေရိကန်အဖွဲ့နှင့် ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်သည်။
ရုရှားလက်နက်ကုန်သည် ဗစ်တာဘောက်ကို အမေရိကန်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးနောက် ယင်းဖိတ်ကြားချက် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘ်ဟီးဆစ်က သက်ဆင်နှင့်ဘောက် လဲလှယ်မည့် အစီအစဉ်ကို ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ထိုင်းအစိုးရ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Panitan Wattanyagorn က သက်ဆင်ကို လွှဲပြောင်းပေးရန် ထိုင်းနိုင်ငံက တရားဝင် တောင်းဆိုခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အာရိုယိုအား စစ်ဆေးနေသည့် စုံစမ်းရေးကော်မရှင်သည် အခြေခံဥပဒေနှင့် မကိုက်ညီကြောင်း တရားရုံးချုပ် ဆုံးဖြတ်
၂၀၀၉ ခုနှစ်က သမ္မတအာရိုယိုအား ထောက်ခံသူ မနီလာမြို့သူမြို့သားများကြားတွင် တွေ့ရစဉ်
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဟောင်း အာရိုယိုအား အကျင့်ပျက် ခြစားမှုအတွက် စုံစမ်းရန် ဖွဲ့စည်းထားသည့် လက်ရှိ သမ္မတ အကွီနို၏ Truth Commission သည် အခြေခံဥပဒေနှင့် မကိုက်ညီကြောင်း တရားရုံးချုပ်က ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခဲ့သည်။
ဇွန်လတွင် စတင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် သမ္မတ အကွီနို အစိုးရသည် အာရိုယိုအား ၎င်း၏သမ္မတသက်တမ်း ကိုးနှစ်အတွင်း ခြစားမှုများ၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လိမ်လည်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့ပြီး Truth Commission အား ဖွဲ့စည်းခဲ့ သော်လည်း တရားရုံးချုပ်၏ ယခုကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် အခက်အခဲများစွာ ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း သိရသည်။
Truth Commission အား တရားသူကြီး အများစုက ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပြီး အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် လူတစ်စုတစ်ဖွဲ့ကို ရည်ရွယ်၍ စုံစမ်းရေးအတွက် အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းမှာ အခြေခံဥပဒေနှင့် မကိုက်ညီကြောင်း တရားရုံးချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရားရုံးချုပ်၏ ယခု ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ မိမိတို့ အနေဖြင့် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိကြောင်း သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြားခဲ့သည်။ ''တရားရုံးချုပ်ရဲ့ အခု ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်အတွင်းက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ မသမာမှုတွေကို စုံ စမ်းစစ်ဆေးဖို့ ကြိုးပမ်းရေးအတွက် အတားအဆီးတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်''ဟု ၎င်းကပြောကြားခဲ့သည်။
အစိုးရအဖွဲ့ အနေဖြင့် တရားရုံးချုပ်သို့ ပြန်လည် လျှောက်ထားမည် ဖြစ်ပြီး စုံစမ်းရေးအတွက် အခြား နည်းလမ်းများ ရှာဖွေသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အီတလီဝန်ကြီးချုပ် လိင်မှုကိစ္စ ဝါသနာကြီးပုံအား အမျိုးသမီးတစ်ဦး ထုတ်ဖော်ပြောကြား
အီတလီဝန်ကြီးချုပ်၏ လိင်မှုကိစ္စအား နောက်ဆုံးပြောဆိုခဲ့သည့် အမျိုးသမီး နာဒီယာက်ခရီ © dailychilli
အီ တလီဝန်ကြီးချုပ် ဆီဗီယို ဘာလူစကိုနီနှင့် ပတ်သက်ခဲ့ဖူးသော အမျိုးသမီး တစ်ဦးက ဝန်ကြီးချုပ်၏ လိင်မှုပျော်မွေ့ပုံ အတွေ့အကြုံများအား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် နာဒီယာ မက်ခရီက နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့တွင် Sky ရုပ်သံနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရာ သူမအား ဘာလူစကိုနီက ဖိတ်ကြားခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ နိုင်ငံတွင် အချမ်းသာဆုံး ဘီလျံနာ သူဌေးကြီး တစ်ဦးဖြစ်သော ဝန်ကြီးချုပ်သည် ၎င်းပိုင် စံအိမ်ကြီးတစ်လုံးသို့ သူမအား ဖိတ်ကြားခေါ်ဆောင်သွားရာ အတွင်းတွင် နိုင်ငံခြားသူ မိန်းမချောများ အမြောက်အမြားကို တွေ့ခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ မာခရီသည် ဘာလူစကိုနီနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည့် နောက်ဆုံးအမျိုးသမီးလည်းဖြစ်သည်။ သူမက ဝန်ကြီးချုပ်သည် လိင်ပျော်ပွဲတွင် ပါဝင်ရန် သူမအား ယူရိုငွေတစ်သောင်း ပေးခဲ့ကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့သည်။
မာခရီက အသက် ၇၆ နှစ်ရှိ ဝန်ကြီးချုပ်၏ လိင်ပါတီပွဲများတွင် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှုများလည်း ပါဝင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သေးသည်။ သို့သော်လည်း ဘာလူစကိုနီ၏ ရှေ့နေဖြစ်သူ နစ်ကိုလို ဂီဒီနီက အမျိုးသမီး၏ ပြောဆိုမှုများသည် အခြေအမြစ်မရှိ၊ သက်သေအထောက်အထား မခိုင်လုံကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး ယင်းသည် ဝန်ကြီးချုပ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိပါးစေကြောင်း တုန့်ပြန်ခဲ့သည်။ ဘာလူစကိုနီသည် ယခင်ကတည်းက မိန်းမကိစ္စ ဝါသနာပါသူအဖြစ် သတင်းကြီးပြီး ယင်းအတွက် ဇနီးဖြစ်သူနှင့်ပါ ကွာရှင်းခဲ့ရကြောင်း သိရှိရသည
ပါကစ္စတန် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဘနာဇီယာဘူတို လုပ်ကြံခံရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကြီးတန်း ရဲအရာရှိနှစ်ဦးကို တရားရုံးက ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်
ပါကစ္စတန် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဘနာဇီယာဘူတို လုပ်ကြံခံရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ပေါ့ဆမှုဖြင့် အဆင့်မြင့်တန်း ရဲအရာရှိ နှစ်ဦးကို ပါကစ္စတန် တရားရုံးက ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း အစိုးရရှေ့နေ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
အကြီးတန်း ရဲအရာရှိတစ်ဦးကို ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဘူတို အတွက် ပြည့်စုံသော လုံခြုံရေး အစီအမံ မစီစဉ်ပေးခြင်းအတွက် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့သည်။ အကြီးတန်း ရဲအရာရှိ အခြားတစ်ဦးမှာ အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာတွင် သက်သေအထောက် အထားများ စုဆောင်းခြင်း မပြုလုပ်သေးမီ ရာဇ၀တ်မှုများကို ရှင်းလင်းပစ်ခြင်းများကြောင့် ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ပြန်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။
အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး တရားရုံးက ဖယ်ဒရယ် စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်၏ ပန်ကြားချက်အရ ရာဝါဒီလ်ပင်ဒီ ရဲချုပ်ဟောင်း Saud Aziz နှင့် ရဲမှူးကြီး Khurram Shazad တို့ကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရရှေ့နေ Chaudhry Aulfiqar Ali ကဆိုသည်။
၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဘူတိုသည် လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲများ အတွက် မဲဆွယ်မှုများပြုရန် ရာဝါဒီလ်ပင်ဒီမြို့ကို ထွက်ခွာချိန် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့တွင် လုပ်ကြံခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂ ကော်မရှင်က ဘူတို လုပ်ကြံခံရခြင်းသည် အစိုးရဌာန အဆင့်အားလုံးတွင် လုံလောက်သည့် လုံခြုံရေး အစီအမံများ ထောက်ပံ့ပေးမှု မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ပြစ်တင် ပြောကြားခဲ့ပြီး ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့နှင့် အခြား အရာရှိများသည် ဘူတို လုပ်ကြံခံရမှု စစ်ဆေးခြင်းများကို ဟန့်တားနေကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့သည်။
ဘူတို၏ပါတီက ဘူတို လုပ်ကြံခံရမှုတွင် သမ္မတဟောင်း မူရှာရက် (သို့မဟုတ်) ၎င်း၏မဟာမိတ်များ ပါဝင် ပတ်သက်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဘူတို လုပ်ကြံခံရသည့် ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ကုလသမဂ္ဂသာလျှင် စုံစမ်း ဖော်ထုတ်နိုင်မည် ဖြစ် ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။
သုတေသန ကုန်ကျစရိတ်ငွေသုံးစွဲမှုတွင် တရုတ် နံပါတ် ၄ နေရာတွင်ရှိ
သိပ္ပံသုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု (R&D) အတွက် တရုတ်နိုင်ငံ သည် ယွမ်ငွေ ၅၈၀ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၈၄ ဘီလီယံ ကျော်ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
အမေရိကန်၊ ဂျပန်နှင့် ဂျာမဏီတို့ ပြီးလျှင် ကမ္ဘာ့ပညာရေးသုတေသနအတွက် ငွေကြေးသုံးစွဲမှု စတုတ္ထ နေရာတွင် ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် လူဦးရေ သုံးသန်းကျော်ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့သုတေသနလောကတွင် အင်အားအများဆုံးဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားစာရင်းအင်းဗျူရိုမှ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် သိပ္ပံဌာန ဒုဒါရိုက်တာ ချာဇီမင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ကထက် ၄ ဆ ခွဲရှိသည့် ငွေကြေးပမာဏကို အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် အမျိုးသားထုတ်ကုန်၏ ၁ ဒသမ ၇ ရာခိုင်နှုန်းသာ သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ရာ၃ ရာခိုင်နှုန်း သုံးစွဲနေသည့် သုတေသန ရှေ့ဆောင် နိုင်ငံများကို လိုက်မီနိုင်ရန်မှာ များစွာလိုနေသေးကြောင်းနှင့် မူလတီထွင်ဖန်တီးမှု၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတို့တွင်လည်း ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများထက် များစွာ နောက်ကျနေသေးကြောင်းကို ချာဇီမင်းက ထပ်လောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
မောက္ခ နိုင်ငံတကာ ပညာရေးသတင်း
ကျော်မင်းနိုင်..၀င်းအောင်..ထွန်းထွန်းဝင်း..ကျော်ဇေယျ တို့လေးယောက်သည် ၀၄.၁၁.၀၈နေ့ တွင်မလေးရှားနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာသည်
ကျော်မင်းနိုင်နှင့် ဝင်းအောင်ကတော့ အေ့ဂျင်း ပွဲစား လမ်းစရိတ်အားလုံး ၁၄သိန်းလောက်ကျတယ် မြန်မာပြည်ကအေးဂျင့် ပြောတာက
ကွန်ပျူတာအပိုပစ္စည်းထုတ်တဲ့ စက်ရုံဆိုပြီး ဓါတ်ပုံတွေထုတ်ပြတယ် basic ကrm18.50တဲ့ ot ၃နာရီပုံမှန် sunday ရှိတယ် ပိတ်ရက်တွေတောင် အရေးကြီးရင်ဆင်းပေးရမှာတဲ့မိန်းကလေးတွေတောင်လုပ်နိုင်တာ သားတို့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး ပို့ လိုက်တယ်
နောက်နေ့ လုပ်ရပါပြီ အပြောနဲ့ အဟောတခြားစီ ပြောတော့ ကွန်ပျူတာအပိုပစ္စည်းထုတ်တဲ့ စက်ရုံတဲ့အခုလုပ်ရတာကအက်စစ်စက်ရုံ
စက်ရုံမှာပဲနေရတယ် အလုပ်လဲမကောင်းဘူး လူလဲအန္တရယ်များတယ် အက်စစ်ဆိုတော့ သိတဲ့ အတိုင်းပဲလေ နဲနဲထိတာနဲ့ စားတာ
ဒီလိုနဲ့ ၂လလောက်လုပ်ပြီး မြန်မာပြည်ကအေ့ဂျင်းကိုဖုန်းဆက်ပြီးအလုပ်ပြောင်းခိုင်းတယ် အဲဒီမှာလုပ်တဲ့ဟာလဲ စားဖို့ ပဲရတယ်အိမ်မပို့ နိုင်ဘူး
ဒီလိုနဲ့ အလုပ်မကောင်းလို့ စက်ရုံ ၅ခုပြောင်းလိုက်ရတယ် တလတခါပြောင်းနဲ့ ရတဲ့ ဟာလဲအေ့ဂျင်းပဲယူလိုက်တယ် အခုလက်ရှိအုတ်စက်ရုံမှာပဲ
လုပ်နေရတယ် ၀င်းအောင်ကတော့ ပါမလာဘူး တခြားစက်ရုံမှာကျန်နေခဲ့ တယ် ၈လလောက်နေတော့ သတင်းကြားတယ် အလုပ်မကောင်းလို အေ့ဂျင်းကို complain ရှာလို့ ဆိုပြီး ကလန်းမှာခေါ်ပြီး သူတို့ ၇ယောက်အဖွဲ့ ကိုသော့ ခတ်ထားပြီး အစားလဲဝအောင်မကျွေးဘူး ၂ရက်လောက်နေပြီး မင်းတို့ အလုပ်ရှာမပေးနိုင်ဘူး passport လဲမပေး သွားချင်ရာသွားတော့ ဆိုပြီး တခါးဖွင့် ပေးလိုက်တယ် အဲဒါနဲ့ ရွာကကောင်သွားခေါ်ပြီး စာဒန်းမှာအလုပ်သွင်းပေးလိုက်တယ် မကြာပါဘူး သူလဲရဲကြောက်တယ်ဆိုပြီး လမ်းစရိတ်ဆုပြီး အောက်လမ်းကနေပြန်သွားပါတယ် သူပြန်မဲ့ နေ့ကကျွန်တော် kl ကိုလိုက်ပို့ ခဲ့ ပါတယ်အင်္ကျီအဖြူအ၀ါကျားနဲ့ ကပြန်သွားတဲ့ ဝင်းအောင်ပါ သူပြန်မဲ့ နေ့ံကဇေယျာဆိုင် ကုက္ကိုပင်အောက်အမှတ်တရ
ကျော်မင်းနိုင်ကတော့ ၂နှစ်တာပြည့် သွားတယ် အိမ်ကို၁၀သိန်းပဲရောက်ပါသေးတယ် အသုံးဖြုန်းလဲမကြီးဘူး အေ့ဂျင့် ကတော့ဖြတ်စားနေတာပဲ ၁၉.၁၀.၁၀ နေ့ကသံရုံးကို သက်တမ်းသွားတိုးရတယ် အေ့ဂျင်းကို၁၉၀၀ပေးရတယ် ဂျိုးဟိုးကနေကေအယ်ကို
အစဆုံးကိုယ့် စရိတ်နဲ့ လာရတယ် ဘာမှတာဝန်မယူဘူး သံရုံးဆောင်ရတာက ၁၃၈၀ပဲကျတယ် ကျန်တာအေ့ဂျင်းစားတယ် ဒါနဲ့ တင်
မတင်းတိမ်ဘူး စာအုပ်ထုတ်ပြီး renew.အခွန်ဆောင်တဲ့ ဖြတ်ပိုင်းစာရွက်လဲ အေ့ဂျင်းကအတင်းယူသွားတယ် အဲဒါနဲ့ ကျော်ဇေယျကသံရုံးကအကိုတယောက်ကို ပိုက်ဆံလဲ ၁၉၀၀ ယူတယ် အခုဖြတ်ပိုင်းလဲမပေးဘူးဆိုပြီးတိုင်လိုက်တယ် သံရုံးလဲကူညီပြီး အေ့ဂျင်းmr than ကိုဆက်ပြီးဆူတယ် အခုသူ့ လူမလေးကောင်ကိုလဲ အဲဒီနေ့ကသက်တမ်းလာတိုးကြတဲ့ရွှေတွေအကုန်ဝိုင်းပြောကြတယ်
နောက်တော့ စက်ရုံရောက်ရင်ပိုတဲ့ ပိုက်ဆံကော ဖြတ်ပိုင်းကောပေးမယ်လို့ ပြောပြီး ညကားနဲ့ ဂျိုးဟိုးပြန်လာခဲ့ တယ် စက်ရုံရောက်တော့ office ကခေါ်ပြီး ငွေ ၁၇၀ ပဲပြန်ပေးတယ် အခွန်ဖြတ်ပိုင်းတော့နောက်မှပေးမယ်ဆိုပြီး အခုချိန်ထိမရသေးပါဘူး အခုလိုလုပ်တာနောက်
သက်တမ်းတိုးမဲ့ လူတွေတော့ ကောင်းသွားပါတယ် ၁၁လပိုင်းကသွားတိုးတဲ့ လူတော့ စက်ရုံကစာအုပ်ထုတ်ပေးးပြီး သံရုံးကျသလောက်ပဲဆောင်ခဲ့ ရတယ် အဲလိုပြီးတော့ အခုအေ့ဂျင်းကယုတ်မာပြန်ပြီ နောက်ထပ်ဆက်တိုးမပေးဘူးတဲ့သက်တမ်းကုန်တာနဲ့ ပြန်ရမယ်ဆိုပြီး office မှာဆိုင်းထိုးခိုင်းတယ်တဲ့အခုချိန်ထိအေ့ဂျင်းကဖြတ်နေတာပဲ နှစ်ကုန်တာနဲ့ ပြန်ရတော့ မယ်
စက်ရုံကထားချင်တယ် အေ့ဂျင်းကမထားတော့ တာ မလေးရှားမှာအဲလိုမျိုးမတရားလုပ်နေတဲ့အေ့ဂျင်းတွေများနေပါတယ် သံရုံးမှာအခွန်ဆောင်လို့ပိုက်ဆံပိုယူရင် သံရုံးကိုတိုင်ကြပါ မကြောက်ကြပါနဲ့ လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် မလေးရှားမှရွှေမြန်မာများ
ကလိန်ကကျစ် အေ့ဂျင်းများရဲ့ ရန်မှကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။
Posted by ဒေါ်လာစား on 09:37
ပြည်တွင်းက ပညာတတ်တွေ နိုင်ငံခြားထွက်သွားပြီး အလုပ်လုပ်ကြတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြင် အယူအဆ အမျိုးမျိုး ရှိကြတယ်။ တချို့ကဒါဟာ ဦးနှောက်ယိုစီးမှု(brain drain) ဖြစ်တယ်။ ပညာသင်ကြားပေးခဲ့ရတဲ့ မိခင်နိုင်ငံအတွက် ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်တယ်လို့ သဘောထားကြတယ်။
ဦးနှောက်ယိုစီးမှုထက်ဆိုးတဲ့ ဦးနှောက်ခြောက်ခန်းမှု (braindry) ပြဿနာလည်း ရှိသေးတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ ဆရာဝန် ဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်မလုပ်ဘဲ ကုမ္ပဏီထောင် စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါ၊ အထည်အလိပ် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရက သင်္ဘောသား သွားလုပ်တဲ့အခါ၊ ဘူမိဗေဒဘွဲ့ရက ဆေးကုမ္ပဏီရဲ့ ဆေးရောင်းသမား သွားလုပ်တဲ့အခါ သူတို့ သင်ယူခဲ့တဲ့ ပညာတွေ မေ့လျော့ ခြောက်ခန်းသွားပြီး အဟာသိကံ ဖြစ်ရတယ်လို့ ရေးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။
ဒီပြဿနာမျိုးဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေမှာ ပိုပြီး အဖြစ်များတဲ့အတွက် တိုးတက်မှု နောက်ကျမှုဟာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုပြီး ဆိုးလာတယ်လို့ ယူဆကြတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ညီလာခံကြီးတွေမှာ ဒီပြဿနာ ဖြေရှင်းရေး အ တွက် အကြိမ်ကြိမ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမယ့် ဒီနေ့အထိ အဖြေရှာမတွေ့နိုင်ကြဘူး။ ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတွေက နိုင်ငံပေါင်းစုံရဲ့ အထက်မြက်ဆုံး ဦးနှောက်တွေကို အချောင်ရနေတဲ့အတွက် မှိန်းပြီး မသိချင်ယောင် ဆောင်နေကြတယ်လို့ စွပ် စွဲသံတွေလည်း ကြားရတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အမြတ်တနိုး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနေရတဲ့ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာရပ်များဟာလည်း ယိုးဒယား၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ စတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာတွေနဲ့ ကူးလူးယှက်နွှယ် နေခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာ ရွာကြီးတစ်ရွာလို ဖြစ်နေတဲ့ ဒီခေတ်ဒီအခါမှာ ကျွန်တော်တို့ချည်းသက်သက် တံခါးပိတ်နေလို့ မဖြစ်ပါဘူး . . .
ဒီနိုင်ငံမှာ ဘွဲ့ရတဲ့အထိ ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးမှ နိုင်ငံခြားထွက် အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံမှာ နစ်နာတယ်လို့ မြန်မာဆိုရှယ်လစ်ခေတ်က ယူဆခဲ့တယ်။ အဲဒီယူဆချက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ နိုင်ငံခြားထွက်ခွင့် လွယ်လွယ်နဲ့ မပေးခဲ့ဘူး။ FRC ကိုင်ထားပြီး အပြီးပြန်တော့မယ့် ''ဖော်ဂွတ်'' (For Good) သမားတွေပဲ အသွားများတယ်။ မြန်မာလူမျိုးများ အတွက်တော့ လွယ်လွယ်နဲ့မထွက်နိုင်အောင် ဘွဲ့နဲ့ဒီပလိုမာအတွက် ပညာရေးလျော်ကြေး ကောက်ခံတဲ့စနစ် စတင်တီထွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ တယ်။ ဒီနေ့အထိ ဒီစနစ် ရှိနေသေးတယ်။ အဲဒီခေတ်မှာ အစိုးရကလွှတ်တဲ့ ပညာတော်သင်နဲ့ အစိုးရကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တွေလောက်ပဲ နိုင်ငံခြား အသွားအလာ ရှိကြတယ်။ ဒီခေတ်လို ရှော့ပင်းထွက်တယ်ဆိုတာ ကြားတောင်မကြားဖူးကြဘူး။
ပညာတတ်တွေ နိုင်ငံခြားထွက် အလုပ်လုပ်တာဟာ နိုင်ငံအတွက် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု မဟုတ်ဘူး။ အမြတ်တောင် ထွက်သေးတယ်လို့ ယူဆသူတွေလည်း ရှိတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတစ်ခုအတွက် အထူးလိုအပ်တဲ့ နိုင်ငံခြားငွေ ရှာ ပေးတာဖြစ်လို့ တားဆီးပိတ်ပင် မလုပ်သင့်ဘူးလို့ သူတို့ကဆိုတယ်။ သီရိလင်္ကာ၊ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတွေဟာ နိုင်ငံခြားသွား နိုင်ငံခြားက ပြန်ပို့တဲ့ နိုင်ငံခြားငွေ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ သန်းရာပေါင်းများစွာ ရရှိနေတာကို ထောက်ပြကြတယ်။ ကမ္ဘာရွာခေတ်မှာ ၀ါးလုံးခေါင်းထဲက ထွက်ကြပါလို့လည်း သူတို့က တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြတယ်။
မကြာမီလေးကပဲ မန္တလေးက စာတစ်စောင်ရတယ်။ အငြိမ်းစားဘီအီး (စက်မှု)အင်ဂျင်နီယာကြီး တစ်ယောက်ဆီကပါ။ သူမြင်တဲ့''ဘရိန်းဒရိန်း''ကတော့ တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ရပြီး အင်ဂျင်နီယာဆိုတဲ့ ရာထူးကြီး ယူထားပေမယ့် တကယ် လက်တွေ့ကျတော့ စာရင်းအင်းတွေ စာရွက်တွေ၊ အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ပဲ အလုပ်ရှုပ်နေရတဲ့ စာရင်းကိုင်လိုလို၊ ရုံးအုပ်စာရေးကြီးလိုလို ဖြစ်နေတာကမှ အမှန်တကယ် ''ဘရိန်းဒရိန်း'' ဖြစ်တာပါတဲ့။
နိုင်ငံခြားထွက် အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် ပိုပြီး မျက်စိပွင့်နားပွင့် ဖြစ်လို့ ''ဘရိန်းဂိန်း'' (brain gain) ဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်တဲ့။ ဆက်ပြီးသူက တိန့်ရှောင်ဖိန်ရဲ့လုပ်ရပ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းတစ်ခု ပြောထားသေးတယ်။ တိန့်ရှောင်ဖိန် အာဏာပြန်ရ တဲ့အခါမှာ ပညာထူးချွန်တဲ့ လူငယ်တွေကို အမေရိကနဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေဆီ ပညာသင်လွှတ်တယ်။ တခြားသူတွေက ဒီလူတွေပြန်မလာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ မေးတော့ ကိစ္စမရှိပါဘူးလို့ ပြန်ဖြေတယ်။ လက်တွေ့မှာလည်း အတော်များများ ပြန်မလာဘဲ ဟိုနိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေကြပြီး တချို့က ဟိုနိုင်ငံသားအဖြစ်တောင် ခံယူလိုက်ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် တံခါးဖွင့် စီးပွားရေးစနစ် ကျင့်သုံးလိုက်လို့ စီးပွားရေး တစ်ရှိန်ထိုး တိုးတက်သွားတဲ့ အခါကျတော့ အဲဒီလူတွေ အများကြီး ပြန်လာကြတယ်တဲ့။ အဲဒီထဲမှာ ပါရဂူဘွဲ့ရ ပညာရှင်တွေလည်း အများကြီး ပါလာတယ်။ တချို့ဆိုရင် နိုင်ငံခြားသားပညာရှင် (expatriate) အဖြစ် တရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာ လခကောင်းကောင်းနဲ့ ၀င်လုပ်ကြသတဲ့။ ဒါတော့ ဟုတ်တယ်။ ရှစ်ဆယ်ခုနှစ်တွေ အတွင်းက FRC တပည့်တွေ အများကြီး အဲဒီအချိန်က တရုတ်(တိုင်ပေ)ကို ဖော်ဂွတ်ပြန်သွား ကြတယ်။ အခု ဒီဘက်ပိုင်း နှစ်တွေကျတော့ သူတို့ထဲက တချို့ဟာ ပေကျင်းတို့ ရှန်ဟိုင်းတို့မှာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတာ တွေ့ရတယ်။
မန္တလေးက အငြိမ်းစား အင်ဂျင်နီယာကြီးကတော့ ပညာတတ်တွေ နိုင်ငံခြား ထွက်သွားတဲ့အတွက် (၁) အတွေ့အကြုံနဲ့ ပညာအရည်အချင်း တိုးတက်တယ် (၂)မိသားစု စားဝတ်နေရေး ပြေလည်စေတယ်။ (၃)တိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်တဲ့ နိုင်ငံခြားငွေ ရစေတယ်။(၄) ထွက်သွားသူတွေနေရာမှာ နောက်လူတွေ အလုပ်ရလို့ အလုပ်လက်မဲ့ လျော့နည်းစေတယ်လို့ နံပါတ်စဉ်ထိုးပြီး ထောက်ခံအားပေးသွားပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတိုင်းဟာ ကိုယ့်အိုးကိုယ့်အိမ်ကို အင်မတန်ခင် တွယ်တတ်သူတွေ ဖြစ်လို့၊ တစ်နေ့နေ့ကျရင် မြန်မာပြည်ကို ပြန်မလာဘဲ မနေပါဘူးလို့လည်း သူကယုံကြည်စိတ်ချမှု အပြည့်ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံခြားထွက်သွားတဲ့ တပည့်တွေ ရာပေါင်းများစွာနဲ့ အဆက်အသွယ် မပြတ်တာကြောင့် ဒီအချက်ကိုတော့ သဘောတူတယ်။ တစ်နေ့မှာ သူတို့အားလုံး ပြန်လာကြမယ်ဆိုတာ စိတ်ချယုံကြည်တယ်။
နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော် ကျောင်းဆရာ လုပ်ခဲ့ရာမှာ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား အများစုက မြန်မာပြည်ပေါက် တရုတ်လူမျိုး ဖြစ်ကြတယ်။ တချို့ဆို တရုတ်စကားတောင် မတတ်ကြဘူး။ ဆိုရှယ်လစ် စကားလုံးတွေ လူတိုင်းရွတ်နေတဲ့ ခေတ်မှာ လုပ်ကိုင်စားစရာ နယ်ပယ်ကျဉ်းမြောင်းလွန်းလို့သာ သူတို့သွားကြတာ ဘယ်သူမှတော့ သွားချင်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်တွေ မဆိုထားနဲ့ သူတို့လို မြန်မာပြည် ပေါက်တရုတ်တွေနဲ့ အိန္ဒိယသားတွေတောင် မြန်မာပြည်အကြောင်း ပြောရင် မျက်ရည်မ၀ဲဘဲ မနေနိုင်ကြပါဘူး။ အခွင့်သာတဲ့ တစ်နေ့မှာ သူတို့ပြန်လာကြမှာပါ။
၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကို ပြန်လာမှာပါလို့တောင် ပြောရဲတယ်။ ဘာကြောင့် ဒါလောက် သေချာနေရတာလဲလို့ မေးရင် မြန်မာစကား မတတ်တဲ့လူတွေတောင် ပျော်လွန်းလို့ ကုတ်နဲ့ကော်ထုတ်တောင် မပြန်ချင်တော့တာတွေကို လက်ညှိုးထိုးပြလိုက် ချင်တယ်။ မြန်မာပြည်မွေး၊ မြန်မာပြည်မှာကြီးပြီး မြန်မာစကား တစ်မျိုးတည်းသာ ပြောတတ်သူတွေ ပြန်မလာဘဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ ပြန်လာတဲ့အခါ တချို့ စုမိဆောင်းမိတာလေးတွေ ပိုက်ပြီး ပြန်လာကြမယ်။ တချို့က ပညာရှင်တွေ ပါရဂူတွေ ဖြစ်ပြီး ပြန်လာကြမယ်။ တချို့ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေ အဖြစ် ပြန်လာကြမယ်။ လက်ချည်းသက်သက် ပြန်လာဖူးသူလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုနည်း ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲ ပြန်လာလာ၊ တိုင်းပြည်အတွက်ကတော့ အကျိုးရှိတာပါပဲ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းစုံက အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ပညာရပ်တွေ၊ အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတတွေ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေ ဖြည့်ဆည်း ရယူနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အမြတ် တနိုး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနေရတဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာရပ်များဟာလည်း ယိုးဒယား၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ စတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာတွေနဲ့ ကူးလူးယှက်နွှယ် နေခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာ ရွာကြီးတစ်ရွာ လို ဖြစ်နေတဲ့ ဒီခေတ်ဒီအခါမှာ ကျွန်တော်တို့ချည်း သက်သက် တံခါးပိတ်နေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ တံခါးတွေ ဖွင့်ထားမှ အခန်းထဲက လေဆိုးလေပုပ်တွေ လွင့်စင်ထွက်သွားပြီး ပြင်ပက လေကောင်းလေသန့်တွေ ၀င်ရောက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသား သင်္ဘောသားတွေ လိုက်ပါလာတဲ့ သင်္ဘောတစင်းကို ဆိုမာလီ ပင်လယ်ဓားပြတွေက ပြန်ပေးဆွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာသင်္ဘောသား ၂၃ ယောက်ပါတဲ့ လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ မှတ်ပုံတင် MV Panama သင်္ဘောကို တန်ဇန်းနီးယား အရှေ့ပိုင်းမှာ သောကြာနေ့က အမြန်ရေယာဉ် ၂ စင်းနဲ့ ဆိုမာလီပင်လယ်ဓားပြတွေက စီးနင်းသိမ်းပိုက်ခဲ့တာလို့ ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) ရဲ့ ရေတပ်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Paddy O’Kennedy က အတည်ပြုပြောဆိုလိုက်တာပါ။
တန်ဇန်းနီးယားနဲ့ မိုဇမ်ဘစ် ၂ နိုင်ငံ နယ်စပ်အရှေ့ပိုင်း ရေမိုင် ၈၀ လောက်အကွာမှာ ရော့ကတ် လက်နက်တွေကိုပါ အသုံးပြုပြီး ပြန်ပေးဆွဲသွားခဲ့တာလို့လည်း ပြောခွင့်ရသူက ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဇန်းနီးယားနိုင်ငံ Dar es Salaam ကနေ မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံ Beira ကို ဦးတည်မောင်းနှင်နေစဉ် အမေရိကန်ပိုင် ကုမ္ပဏီတခုက ပြေးဆွဲနေတဲ့ ဒီသင်္ဘော တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး အခြေအနေကိုတော့ မသိရသေးဘဲ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ EU ရေတပ်က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာဆိုရင် ဆိုမာလီမြစ်ဝှမ်းဒေသမှာ ပင်လယ်ဓားပြတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ချဲ့ထွင်လာတဲ့ နမူနာတခုဖြစ်တယ်လို့လည်း EU ရေတပ် ပြောခွင့်ရသူက ဆိုပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံနားမှာ ဒီတပတ်အစောပိုင်းတုန်းက ပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရတဲ့ သင်္ဘောတစင်းကိုလည်း ဆိုမာလီကမ်းလွန်မှာ မကြာသေးခင်က တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ MV Jahan Moni သင်္ဘောပိုင် ကုမ္ပဏီက ဂြိုဟ်တုဓါတ်ပုံတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ သင်္ဘောရှိရာနေရာကို စနေနေ့ကပဲ အတည်ပြုပြောဆိုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မလေးရှားတွင် ရဲ အတုများ သတိထားပါ ... ရွှေမြန်မာတို့ အခုဆိုရင် ဒုစရိုက်သမား တွေဟာနည်းမျိုးစုံ သုံးပြီး foreigner အလုပ်သမားတွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး လုပ်နေကြပါတယ်။ ကြုံဘူးတဲ့လူတွေရော မကြုံဘူးတဲ့လူတွေပါအတွေ့အကြုံဗဟုသုတ ရစေရန်အတွက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၂၉ . ၁၁. ၁၀ နေ့လည် ၁၁ ခွဲလောက်က ကျွန်တော်အပေါ်ထပ်ကနေ အောက်ဆိုင် ကိုဈေးသွားဝယ်ပါတယ်။ ၀ယ်ပြီးပြန်လာတိုက်ပေါ်တက်ခါနီး ဆိုင်ကယ်နဲ့ လူတယောက်အပြေးမောင်းလာပြီး ကျွန်တော့်ရှေ့ထိုးရပ်ပြီး ဆိုင်ကယ်ပေါ်က ဆင်းလာတယ်။ နောက် .... သူ့ ရဲ့အိပ်ကပ်ထဲက ကဒ်ထုတ်ပြပြီး ငါကရဲပူတာဂျာယာမှာနေ တဲ့ ရဲလို့ ပြောပြီး ဒီရပ်ကွက်ဘာရပ်ကွက်လဲတဲ့ အဲဒါနဲ့ရဲအတု ဆိုတာသိနေပြီ မင်းက ဘာလူမျိုးလဲတဲ့ .... ငါ ... မြန်မာလို့ ဂျလန်းကဒ်ပြဆိုပြီး အခန်းသွားမယ်တဲ့ ကျွန်တော်လဲစက်ရုံ လိုက်ခဲ့ မန်နေဂျာရှိတယ်ဆိုပြီး ကုလားမဆိုင်ဝင်ပြီးပြောပြလိုက်တယ်။ ကုလားမနဲ့ မလေးကောင်လိုက်လဲ လာရော အဲဒီလူလဲမရှိတော့ဘူး ရဲအတု တွေတဲ့ .... ကျွန်တော်သာ အိမ်ခေါ်သွားရင် ဓါးထောက်ပြီးရှိတာ အကုန် ယူသွားမှာ သေချာတယ်။ ညအလုပ်လဲ သွားရောစက်ရုံက အစ်မပြောတယ်။ ၀၀နဲ့ လူလားလို့ မေးတယ်။ ဟုတ်တယ်လို့ အဲဒီလူကဒီမှာ နေပြီးအဲလိုလုပ်စားနေတာတဲ့ ဆေးသမား တဲ့ ၈ လပိုင်း လောက်က ရွှေမတွေ အိမ်ဝင်ပြီးရှိတာ အကုန်မသွားတယ်တဲ့ အရင်၂ ပတ်လောက်ကလဲ ....... ရွှေတစ်ယောက် လမ်းဘေးဖုန်းနဲ့ဆက်နေတာ ဓားထောက်ပြီး ဖုန်းနဲ့ ပိုက်ဆံ အိတ် ယူပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်။ kl စာတိုက်ကြီး မိုးပျံဂုံးတတား အောက်မှာ လဲသတိထားသွားကြပါ။ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း ၄ယောက် ပြန်အလာ နောက်တယောက်က ဖုန်းပြောရင်းနဲ့ ကျန်နေခဲ့တယ်။ အဲဒါ ... ဓားထောက်ပြီး အကုန်ယူလိုက်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အနားနားကို သူစိမ်းအကပ်မခံပါနဲ့ လမ်းသွားရင်း မလိုအပ်ရင် ဖုန်းမပြောပါနဲ့ လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာ များသည် ထင်မြင်ချက်နဲ့ ရေးတာမဟုတ်ပါ။ကိုယ်တိုင်ကြုံ တွေ့ ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် တွေပါ။ မလေးရောက် မြန်မာများသွားလာသော အချိန်တွင် သတိရှိရှိ သွားလာကြပါ။
ရေးသူကတော့ သန်းကျော်မြင့် ဖြစ်ပါတယ်
ဒီပို့ စ်ကို အောင်နိုင်သူ ဆိုဒ်မှပြန်လည်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ။
မထသ ဘတ်စ်ကားများတွင် GPS နှင့် နှာဘူးဖမ်း ကင်မရာ တပ်ဆင်ရန် ညှိနှိုင်းနေ
မြို့ထဲသို့သာ ပြေးဆွဲပြီး မြို့ပြင်သို့ ပြေးဆွဲခြင်း မပြုသည့် "မထသ" ဘတ်စ်ကားများတွင် GPS အပြင် လုံခြုံမှု စနစ်ပါသော Car Black Box System ကို တပ်ဆင်ရန်အတွက် မထသနှင့် အရောင်းဆိုင်တို့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် နေကြောင်း သိရသည်။
Car Black Box System သည် မော်တော်ယာဉ်မောင်း၏ မဆင်မခြင် မောင်းနှင် ခြင်း၊ စပယ်ယာများမှ ကိုယ့်ပိုက်ဆံ ကိုယ်ပေးစီးသည့် ခရီးသည်များကို လူမဆန်စွာ အော်ဟစ် ဆဲဆို ကြိမ်းမောင်းခြင်း၊ မချေမခံဆက်ဆံခြင်း တ်ို့အပြင်
အချို့သော နှာဘူး အမျိုးသား ခရီးသည်များက အမျိုးသမီး ခရီးသည်များကို နှမချင်း မစာနာပဲ အနောက်မှ နေ၍ မဖွယ်မရာ "ထောက်လှမ်းရေး" အပြုအမူ ပြုလုပ်ခြင်းများကို ဗီဒီယို ပုံရိပ်အနေဖြင့် ပြည်လည် ကြည့်ရှု နိုင်ပြီး GPS ပါဝင်ခြင်းကြောင့် ယာဉ်မောင်းနှင်သော လမ်းကြောင်းကို မြေပုံဖြင့် အသေးစိတ် သိရှိနိုင်ရုံမျှမက၊ အင်တာနက် Google Map မှတဆင့် နှာဘူးကျနေပုံများကို 3D ပုံရိပ်ဖြင့် ကြည့်ရှု နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ စနစ်သည် MRTV-4 နှင့် ချိတ်ဆက် ထားသည့် အတွက် ထူးခြား ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပါက နှာဘူးများ၏ ပြုမူနေပုံများကို ရုပ်မြင်သံကြားမှ နေ၍ အများပြည်သူ သိမြင်နိုင်စေရန် တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ပြသ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
”ဒီစက်တွေကို ပါရမီကား ၂ စီးမှာ စမ်းသပ်တပ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ အောင်မြင် တယ်။ အဲဒီအတွက် မသထဘတ်စ်ကားတွေမှာ တပ်ဆင်ဖို့ ညှိနှိုင်းနေဆဲပါ” ဟု TRUE VALUE မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိ အနေ အထားတွင် Car Black Box System စက်များကို ကိုယ်ပိုင်အိမ်စီး ကားများနှင့် ရုံးသုံး ကားများတွင် တပ်ဆင်မှုများပြီး အချို့မှာကုန်ပစ္စည်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကားများတွင် တပ်ဆင်ကြကြောင်း သိရသည်။ ယင်းစက်ပစ္စည်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းလာသည်မှာ လပိုင်းသာရှိသေးပြီး ထိုင်ဝမ် ထုတ်ဖြစ်ကာ ဈေးနှုန်းအနေ ဖြင့် ၂ သိန်းခွဲ ဝန်းကျင်ရှိပြီး ဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့် ၁ နှစ်အာမခံ ပေးထားကြောင်း TRUE VALUE အရောင်းဆိုင်မှသိရသည်။
ညသန်းခေါင်ယံ ကြယ်မိုးတွေ ရွာမည်
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက် ညသန်းခေါင် ယံအချိန်မှ စတင်၍ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက် နံနက် ၃ နာရီ အထိ ကြယ်မိုး ရွာသည့် ဖြစ်စဉ် ပေါ်ပေါက်မည် ဖြစ်ပြီး လ အလင်း ရောင် ပျောက်ကွယ် သွားစဉ်တွင် ယင်း ဖြစ်စဉ်ကို သာမန် မျက်စိဖြင့် ကြည့်ရှု နိုင် ကြောင်း၊ ကြယ်မိုး ရွာသွန်း မှုသည် ပုံမှန် အားဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် ရှစ်ကြိမ်မှ ကိုးကြိမ် အထိ .ဖြစ်ပေါ် တတ်ပြီး သဘာဝ အလျောက်သာ ဖြစ်ပေါ် ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ မည်သည့် ဘေးအန္တရာယ်မှ ကမ္ဘာပေါ်သို့ မကျရောက် နိုင်ကြောင်းကို နက္ခတ် သိပ္ပံ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် ဦးဇေယျာကိုက နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။ ကမ္ဘာက တစ်နှစ် အတွင်း နေကို တစ်ပတ် ပြည့်ရန် လှည့်ပတ် နေစဉ် အတွင်း ဥက္ကာပျံ အစိုင်အခဲ နေရာ များကို ဖြတ်သန်း သွားရသော ကြောင့် ကမ္ဘာ့ ဆွဲငင် အားသည် လေထု ထဲသို့ ရောက်ရှိကာ ကာဗွန်ဒိုင်ကို ချေဖျက်၍ အလင်းရောင် အဖွဲ့များ တွေ့ရခြင်း ကို ကြယ်မိုး ရွာသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်ကို လာမည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါ ရီ ၃ ရက်၊ ဧပြီ ၂၂ ရက်၊ မေ ၅ ရက်၊ ဇူလိုင် ၂၈ ရက်၊ အောက်တို ဘာ ၃ ရက်နှင့် ၁၇ ရက်နေ့ များတွင် အရှေ့ဘက် အရပ်မှ ကြည့်ရှု နိုင်ကြောင်း သိရသည်။ နက္ခတ် အကြောင်းများ လေ့လာ နိုင်ရန် အတွက် နက္ခတ္တ ပြက္ခဒိန်ကို ဒီဇင်ဘာ လဆန်းတွင် ဖြန့်ချိ မည်ဟု သိရသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံဖွား အာကာသယာဉ်မှူး ပီးယားဆယ်လာက မကြာမီအချိန်အတွင်း စကြ၀ဠာအတွင်း၌ ဂြိုဟ်သားများကို တွေ့ရှိလာရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။သူက ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မကြာခင် ဂြိုဟ်များကို ကြည့်နိုင်သည့် အလွန်အားကောင်းသော အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း မျိုးရရှိလာပြီး ယင်းမှတစ်ဆင့် ဂြိုဟ်သားများကို တွေ့မြင်လာရလိမ့်မည်ဟု မျိုးရရှိလာပြီး ယင်းမှတစ်ဆင့် ဂြိုဟ်သားများကို တွေ့မြင်လာရလိမ့်မည်ဟု မျိုးရရှိလာပြီး ယင်းမှတစ်ဆင့် ဂြိုဟ်သားများကို တွေ့မြင်လာရလိမ့်မည်ဟု မျိုးရရှိလာပြီး ယင်းမှတစ်ဆင့် ဂြိုဟ်သားများကို တွေ့မြင်လာရလိမ့်မည်ဟု ဆိုသည်။သူက Royal Society ၃၅၀ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပရာ၌ ယင်းကဲ့သို့ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူက စကြ၀ဠာထဲတွင် ကြယ်ပေါင်းများစွာရှိပြီး ယင်းတို့ကို ဂြိုဟ်များက လှည့်ပတ်နေရာ သူတုိ့သည်လည်း သူတို့ကိုယ်ပိုင် နေစကြ၀ဠာစနစ်ရှိရာ ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာနှင့်တူသော ဂြိုဟ်ပေါင်းများစွာရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ မစ္စတာဆယ်လာ(၅၅နှစ်)သည် နာဆာအဖွဲ့၏အာကာသခရီးစဉ်များ၌ လိုက်ပါခဲ့ဖူးသည့် အာကာသယာဉ်မှူးတစ်ဦး ဖြစ်သည်။
ပည်တွင်းမီဒီယာများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း ဖော်ပြရန် စီစဉ်
ရန်ပိုင် Tuesday, 14 December 2010 18:35
ပြည်သူ့ခေတ် ဂျာနယ်နှင့် ဗီးနပ်စ် ဂျာနယ်တို့က “တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း” ထည့်သွင်းဖော်ပြရန် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ရုံးချုပ်၌ ယနေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သွားရောက် တွေ့ဆုံကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် လှုပ်ရှားမှုသတင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စာပေစိစစ်ရေးက စိစစ်ပိတ်ပင်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည် (ဓာတ်ပုံ - အေပီ)
အဆိုပါဂျာနယ် နှစ်စောင်အား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မိနစ် ၃၀ ခန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့် ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ဂျာနယ် အတော်များများလည်း တွေ့ဆုံခွင့် တောင်းထားကြောင်း NLD ပါတီ ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်သည့် ဦးအုန်းကြိုင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ဂျာနယ်မှာ ထည့်ဖို့ အင်တာဗျူး တောင်းတာပါ။ သူတို့ တွေ့ခွင့် တောင်းထားတာ ကြာပါပြီ။ ဒီစာစောင် ၂ စောင်ကို အခု စတွေ့တာပါ” ဟု ဦးအုန်းကြိုင်က ဆိုသည်။
စစ်ရေးပူးပေါင်းမှု တိုးမြှင့်ရန် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ ဆွေးနွေး
စိုင်းဇွမ်ဆိုင်း Tuesday, 14 December 2010 19:12
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တချို့သည် စစ်ရေးအရ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်မှုများ တိုးမြှင့်သွားရန် ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း၊ အထူးဒေသ (၄) အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ် တပ်မတော် (NDAA) ဌာနချုပ်တည်ရှိရာ မိုင်းလားမြို့တွင် အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းရှိ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် မိုင်းလားတွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များ တွေ့ဆုံပြီး စစ်ရေးအရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် NDAA ခေါင်းဆောင်များ၊ “ဝ” ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) ၏ ဒုတိယ ခေါင်းဆောင် ကျောက်ကြုံးတန်းနှင့်အဖွဲ့၊ အပစ်ရပ် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း (SSA-N)၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင်ပိုင်း (SSA-S) မှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရသည်။
ယခင် ရက်သတ္တပတ်က မိုင်းလားမြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်၌ ယင်းကဲ့သို့ ဆွေးနွေးကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ခဲ့သူ သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာန အယ်ဒီတာ ဦးစိန်ကြည်က ဆိုသည်။
နယ်စပ်တွင် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေ
သန်းထိုက်ဦး Tuesday, 14 December 2010 19:07
ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ် မြို့နယ် ဝေါ်လေ ဒေသတွင် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) နှင့် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာ သာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA) ပူးပေါင်း တပ်များက နအဖ တပ်ရင်းများကို ယမန်နေ့က ခြုံခိုတိုက် ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ DKBAနှင့် KNU တပ်ရင်း ၁၀၃ ပူးပေါင်း တပ်များက ဝေါ်လေဒေသတွင် လှုပ်ရှားနေသော နအဖ၏ ခြေမြန်တပ်ရင်း(ခမရ) ၂၂၉ နှင့် ၄၀၁ တပ်ရင်းများကို ပြောက်ကျား စနစ်ဖြင့် ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KNLA) တပ်ရင်း ၁၀၁ တပ်ရင်းမှူး ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး ဖောဒိုက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဝေါ်လေဒေသရှိ ခြူးကလီ အပါအ၀င် မောလူခို့ စသည့် နေရာများတွင် အပြန်အလှန် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်း ဒေသများတွင်လည်း နအဖ တပ်များ ထပ်မံ၍ လှုပ်ရှားလာပါက တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်၍ ဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း ဗိုလ်မှူး ကြီး ဖောဒိုက ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ် နောက်အဆင့်တွေကို စောင့်မနေပဲ အနည်းဆုံး ၂၂၀၀ ကျော်လောက် ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ လိုအပ်နေကြောင်း၊ ပြန်လွှတ်လိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ Tomas Ojea Quintana က ပြောဆိုပါတယ်။
ကျန်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အများစုဟာ အကျဉ်းထောင်တွင်း အခြေအနေတွေ ဆိုးဝါးလွန်းတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့နေကြကြောင်း၊ ဒီလ ၈ ရက်နေ့ကဆိုရင် အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ သံဃာတော်တပါး ပျံလွန်တော်မူ့ခဲ့ကြောင်း၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကနေစပြီး အခုအထိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၄၅ ဦး ထိန်းသိမ်းခံထားရစဉ်အတွင်း သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်မှာ ပါရှိပါတယ်။
အဲဒီလို အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မစ္စတာ Quintana က RFA ကို ပြောဆိုရာမှာ အခုလက်ရှိ စစ်အစိုးရအနေနဲ့ ပါလီမန်ခေါ်တာတွေ ၊ နောက်အစိုးရ တက်လာတာတွေကို စောင့်မနေပဲ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းအတိုင်း လျှောက်လှမ်းမယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေဟာ မလွဲမသွေ လိုက်နာရမဲ့ ဒီမိုကရေစီစံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးပါမယ်လို့ သူကို ကတိပေးခဲ့ပေမဲ့ အခုအထိ လွတ်ရက်စေ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လွဲလို့ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား တယောက်မှ လွှတ်မပေးသေးဘူးလို့ ပြောဆိုသွားပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ ဒုံးကျည်လက်နက်နဲ့ တခြား စစ်ရေးနည်းပညာတွေမှာ မြောက်ကိုးရီးယား နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ရှိနေတာ ကိုယ်တွေ့သိခဲ့ရပေမဲ့၊ နျူကလီးယားကိစ္စကိုပါ ကြိုးပမ်း နေတယ်ဆိုရင်တော့ မဖြစ်နိုင်တာကို ငွေကုန်ခံ၊ ဘဝတွေ အကုန်ခံပြီး အချည်းနှီး ဆောင်ရွက်နေတာပါလို့ ပြည်ပကို ထွက်ပြေးလာတဲ့ ဗိုလ်မှူး စိုင်းသိန်းဝင်းက RFA ကို ပြောပါတယ
မုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေး ဒေသခံခေါင်းဆောင်များနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆွေးနွေး
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက် ဒီကနေ့ မနက်က ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လေဘေး ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ဂီရိကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း ကူညီလုပ်ဆောင်နေမှုတွေနဲ့ ပြည်နယ်စည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အကျဉ်းထောင် အသီးသီးမှာ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင် ခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေထဲက ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့နေတဲ့ အကျဉ်းသားပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ရှိနေပြီး သူတို့ဟာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေကို ကောင်းကောင်း မရကြသလို အကျဉ်းသားတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးတွေလည်း ဆုံးရှုံး နစ်နာနေကြရတယ်လို့ ထိုင်း၊ မြန်မာ နယ်စပ်အခြေစိုက် AAPPB ခေါ် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ကြီးက ပြောပါတယ်။
မြင့်မောင် | အင်္ဂါနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၄၈ မိနစ်
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရခိုင်ပြည်နယ် ဂီရီမုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ပြည်သူများအတွက် ငွေကျပ်သိန်း ၁၀၀ မနေ့က လှူသည်ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ပြောသည်။
“ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့အတွက် လှူဒါန်းတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ၊ သူ့အတွက်ရထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပိုက်ဆံတွေကို ဘယ်မှာမှ မသုံးဘူး၊ အဖွဲ့ချုပ်အတွက်ပဲ သုံးတယ်။ အဖွဲ့ချုပ် သုံးတာကလဲ ပြည်သူလူထု အကျိုးအတွက်ပဲ သုံးနေတာပဲ။ အဲဒါကြောင့်မို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လှူတယ်ပဲ ပြောပြော၊ အဖွဲ့ချုပ်က လှူတယ်ပဲ ပြောပြော အတူတူပဲ” အဖွဲ့ချုပ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောသည်။
ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလူငယ်များ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် လွတ်မြောက်မှု အခမ်းအနားကျင်းပ
Tuesday, 14 December 2010 00:47 Editor
Rochdale PeaceJam ခေါ် နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်း ရေးလှုပ်ရှားသူ လူငယ်များက နိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်မှုအတွက် အမေရိကန် ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ် ဒန်ဗားမြို့တွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၃ရက်
ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့က အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ကြသည်။
PeaceJam အဖွဲ့ကို ဘုန်းတော်ကြီး ဒတ်စ်မွန်ဒ်တူးတူး၊ ဒလိုင်းလားမား၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်များမှ ဦးဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ လူ့အခွင့်ရေးနှင့် ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေး ပိုမိုရရှိဖို့အတွက် လူငယ်များ အပြုသဘောဆောင်ပါဝင်လာအောင် ရည်ရွယ်လှုပ်ရှားခြင်း ဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင်များက နှစ် ၂၀ အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် အကြိမ် ကြိမ်ကျခံရမှုမှ လွတ်မြောက်အောင် မနားတမ်း ဆော်ဩဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး၊ လူငယ် များကိုလည်း ၄င်းတို့ကဲ့သို့ ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်လာရန် အားပေးတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ယခု ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် လွတ်မြောက်မှုအတွက် အခမ်းအနား ကျင်းပကြခြင်းဖြစ်သည်။
Rochdale PeaceJam အဖွဲ့သည် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အင်္ဂလန်တွင်ကျင်းပသော Peace Jam ညီလာခံသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အရှေ့တီမောသမ္မတ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ဟိုဆေးရာမို့်စ်ဟော်တာနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လတွင်လည်း နိုဘယ်ဆုရှင် အမျိုးသမီး ဘတ်တီဝီလျံနှင့် တွေ့ဆုံကြမည် ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်တွင် peaceJam အဖွဲ့သည် အကြမ်းဖက်မှု၊ စစ်ပွဲ၊ ပဋိပက္ခ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး စတဲ့ ကမ္ဘာ့ပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကမ်ပိန်းများ၊ လူငယ်ချင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ လုပ်ခဲ့ကြသည်။
14 December 2010: When I read the scripture text on the Jew's return from the 70-year-long Babylonian captivity, I envision the picture of the Chin refugees returning from all parts of the world to the God-given land of Chin State in great numbers. I strongly hope there will beaday when the deported Chin people will find their ways home to Chinland. There will be time the runaways will be back as returnees.
Although the way the Chin people left our homeland differs from the way the people of Judah left their land, our status is the same as theirs—both of us being exiles inaforeign country. The Jewish captives were exiles and so are we. But our dissimilarity is that the Jews were deported as captives whereas we are resettled as fugitives. Our captivity also differs from the Jewish captivity. Whereas the Jews were captives out of the country, we are captives in the country.
It is apparent that we are really captives in our own land. The entire Chinland is in captivity with its people being deprived of liberty and freedom. The whole Chinland is likeaprison-house in which are the people detained. The whole Chinland is likeadoor-locked chicken-house in which the poultry are left starved with very little food over which they are fighting one another for their lives' sake. The weaker chickens only stare enviously at the stronger ones greedily gobbling up the little food.
In consequence, it is reasonable that the poor weaker fowls should be struggling to get out of the house by any means. In the perspective of situational ethics, Christian or secular, the weaker fowls are justifiable to seek any possible way-out for their lives. They are just to fly out through the window. They are fair to get out through the ceiling holes. It is not guilty to createaway-out for an escape to freedom; for life is too priceless to give up to the pitiless. Likewise, freedom is too precious to entrust to the vicious. Loyalty is too invaluable to pay to the unreliable.
The situation of the Chin people is no better. The weaker poor people are deprived of their livelihood by the stronger so-called elites—the junta officers and their loyalists. I want to state my eye-witnessed unpleasant incident which wasacase in this point. During one summer vacation while I was in Hakha, I planned to visit my native village. On being informed that I would go to my village, my niece,amother of three children, keptafattened hen foradinner she planned to invite me to. Looking forward to my arrival, the little children frequently asked their mother, "Mum, when will uncle get to us?" It was not because they longed to see me but rather because they longed to eat chicken. (An average family in Chin State can hardly eat chicken once in two months. As for my family of three persons—my mother, my niece and myself—we could eat two chickens inaperiod of six years when I was in Hakha. That time, my salary was above the average person's monthly income.)
Regrettably, I delayed my travel to my village because of some reasons. In the meantime, an army officer and his men came to my village, and seized the fattened hen that the children longed to eat. Who ate the chicken? The wildcats—so to say—the junta wildcats. Now the soldiers ate up the children's meat. Thus they robbed the children's hope, joy, potential and courage. In this way, the cruelly exploitation of the junta is sapping the children of their energy, their courage, until they lose their confidence. Consequently, these children lose their holistic rights of humanity. They lose their healthiness, their physical development, their psychological development, their intellectual development. Hence, they lose the blessed life of abundance. Asaresult, they lose even their life expectancy.
The primary and central cause of all these problems is political chaos. The aforesaid social ills are the effects of political injustice and discrimination. The political iniquity is the original and central cause of these problems. We face with many terrible encounters in three areas of human life—political, religious and economical.
Politically, the ethnic minorities in our country are suffering from bitter racial discrimination, oppression and pressure by various means with the purpose for Burmanization of the ethnic peoples; that is, they are forced to speak Burmese only and convert to Buddhism. The junta’s unwritten policy towards the ethnic minorities is both preventive and repressive. They create various means to block the development of the minority languages and identities. When the military regime took power in 1988, they eliminated the Lai language from the academic subjects in public schools. It followed that, withinaperiod of two decades, the Chin young people can hardly read or write their own native language.
The Lai language is now in danger of extinction. We lose much of our cultural values such as traditional dances, songs, folktales along with the language which is the backbone of culture. Publication of books in minority language is strictly prohibited on pain of three-year imprisonment1. Literature works such as history, novels in Chin, are required to be translated into Burmese before they are published. In this way, we, the Chin ethnics, have been losing our own cultural elements in our own land. We have almost lost our own identity, our uniqueness in our own land.
Religion isamajor reason that invites severe antagonism, opposition and oppression by the exclusive junta government. Simply on religious and racial bases, the Christian Chin people are treated as secondary citizens, given less opportunity for important posts in government offices. The worst of it is the government’s deliberative action against church activities in all Chin State.
While writing this article, I recall an event of the authorities’ preferential and partial treatments on two of my villagers who came to stay at my residence in the TABC Headquarters in Thantlang. They were from the same village. They came together. They came with their own businesses. The older man came to attendaChristian annual meeting whereas the other was to attend the government-organized People’s Militia Training courses. As they arrived at the gate of our headquarters, the man with religious affair was arrested whereas the other young man, who was to join the government-conducted militia training, was freed. The police authorities attributed the curfew as the reason for the arrest, for my guests arrived during the curfew hours. But this could not beastrong reason, for they did not arrest the young man. This wasadiscriminative and intentional act. This wasasign of their indifference to Christian movements. This wasasign of their antagonism against Christianity; it wasacreation ofahindrance to the Christian activities. Their discrimination was very evident between the two, who came from the same village, arriving at the same time, in the same town, directing to the same house. One was arrested and put into prison simply on the basis of his religious business, while the other man with government business was freed.
There are still other more instances of such cases in Chinland. Religious meetings and assemblies are required to apply for permission from regional military authorities. In the application, the name list of the participants should be appended. The application should state who will speak on which day and on which night. This is nothing but the creation ofadifficulty for our religious movements. This isaviolation of religion by the state. As religion should not interfere with state’s affairs, the state should not interfere with religious affairs. Besides, the junta not only takes control over the church; but also intrudes into the internal affairs of Church-related organizations. While I was serving asalecturer ataseminary, at every turn of each semester, the intelligence used to examine our academic subjects. Once, we proposed to put Chin History as an academic subject in the school’s curriculum, but higher Chin officers in the government offices argued against the proposal that it might invite problems from the government.
However, in the mist of our hardships, God has heard the cries of the Chin victims with the ears of UNHCR officers and many sympathetic countries, who offer their helping hands to us. A great number of us will hopefully be resettled to countries overflowing with milk and honey. There we will receive God’s blessings. We will also suck the milk of education in various fields. We will be improved and filled up with novel thoughts, ideologies, technologies, and the like. We will buildanewly transformed community. We will beanew community,acommunity of God,apeople of God,apeople of righteousness,apeople of love. We will be likeacompany of bees, not like the butterflies that live individually. We must not be like the butterflies that suck nectar for their own enjoyment and do not bring anything home for their children, for their fellows. We must be like the bees who diligently work in cooperation for their company—the hive—that storesalot of sweet honey that signifies helpfulness and benevolence. With the various kinds of blessings we will rebuild our land, our people. We will make our Chinlandaland on the hill,acity on the hill, and our peopleapeople of God, love and justice.
There is hope for the future that the gate ofapeaceful Chinland may be open to the expatriates. Then the recorded names of the returnees and the contributors will be called out. When the roll is called then, our names will be there in the list and we will be there.
နိုင်ငံတခု၊ တိုင်းပြည်တခုမှာ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့စနစ်၊ ဖက်ဆစ်စနစ်၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်၊ ရွေးကောက်ခံ အာဏာရှင် စတဲ့ စနစ်ဆိုးတွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ရင် နိုင်ငံအတွင်းမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုတွေ၊ စီးပွားရေးအခြေအနေ ပျက်ယွင်း ယိမ်းယိုင်မှုတွေကြောင့် တိုင်းပြည်ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှောင့်နှေးသွားလေ့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ခေတ်ပျက်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး နိုင်ငံရေးအာဏာ၊ စီးပွားရေး ချုပ်ကိုင် ခြယ်လှယ်နိုင်မှု စတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေကို ရယူလေ့ရှိတဲ့ မသူတော်လူတန်းစားတွေ ထွက်ပေါ် လာလေ့ရှိသလို၊ စနစ်ဆိုးကို တွန်းလှန်တဲ့ တော်လှန်သော လူတန်းစားတရပ်လဲ ပေါ်ထွက်လာ တတ်ပါတယ်။ ဒီတော်လှန်သော လူတန်းစားထဲမှာလဲ ဖောက်ပြန်သော ကိုယ်ကျိုးရှာသမားတွေ ပေါ်လာတတ်သလို၊ ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားကို အမှန်တကယ် ရှေးရှုတဲ့ တော်လှန်ရေးသမားတွေလဲ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။
ဒီတော်လှန်ရေးသမားတွေထဲမှာလဲ တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို ခေါင်းဆောင်ဖို့ အများက ယုံကြည်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ခေါင်းဆောင်စင်မြင့်ပေါ်ကို တွန်းထိုးတိုက်ခိုက်ပြီး တက်ကြတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ မည်သူမျှ ခေါင်းဆောင်လို့ သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပဲ မိမိဘာသာ ခေါင်းဆောင်လို့ ထင်နေကြသူတွေပါ ရှိနေပြန်ပါတယ်။ ဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေ အများကြီးထဲမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ လူထုခေါင်းဆောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ရှစ်လေးလုံး ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကြီးက မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့၊ လူထုတိုက်ပွဲထဲမှာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
တော်လှန်ရေးတရပ်ကို အောင်မြင်စွာ ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အရေးမှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ ပေါ်ထွက်လာနိုင်မှုက အရေးကြီးသလို၊ ဒီခေါင်းဆောင်ကို လက်တွေ့ကျကျ ၀န်းရံပေးနိုင်မှုကလဲ အရေးပါတဲ့ အချက်တရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ၀န်းရံပေးမှုလို့ ပြောတဲ့အခါ အချို့က ဒီခေါင်းဆောင်ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ပါတီတွေမှာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ၀င်ရောက်တာ၊ ဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့ အနီးမှာနေတာလို့ ယူဆတတ်ကြပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် မှန်သလိုလို ရှိပေမယ့် လက်တွေ့မှာ ခဲယဉ်းပါတယ်။ မြေပေါ်လှုပ်ရှား တက်ကြွသူတဦးအနေနဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဦးဆောင်ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ၀င်ရောက်ဖို့ လွယ်ပေမယ့် မြေအောက်လှုပ်ရှား တက်ကြွသူတဦးအနေနဲ့ကတော့ မြေအောက်ယူဂျီ စည်းကမ်းကို တိတိကျကျ လိုက်နာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မလိုအပ်ပဲ လိုင်းပူး၊ လိုင်းဆက်တာတွေ မလုပ်ရပါဘူး။
ဒီလိုမဟုတ်ရင် မြေအောက်ယူဂျီကလာပ်စည်းတွေကို ဒုက္ခဖြစ်စေရုံမက လူထုခေါင်းဆောင်ကိုပါ ဒုက္ခရောက်စေတတ်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးသမား၊ နိုင်ငံတကာ ကင်ပိန်းလှုပ်ရှားမှု တွေမှာလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ မလိုအပ်တဲ့ လိုင်းပူး၊ လိုင်းဆက်မှုတွေဟာ မြေအောက်ယူဂျီသမား တွေလောက်တော့ မိမိအပေါ်မှာ အန္တရာယ်မများပေမယ့်၊ လူထုခေါင်းဆောင်နဲ့ မြေပေါ် အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ အန္တရာယ်တွေ ကျရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ တာဝန်ယူမှုဟာ တာဝန်သိတတ်မှုနဲ့ ဒွန်တွဲနေပါတယ်။ မိမိရဲ့ တက်ကြွမှု၊ တာဝန်ယူလိုမှုတွေကို အချိန်အခါ၊ အခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ သတိတရား၊ တာဝန်သိတတ်မှုတို့နဲ့ ထိန်းညှိနိုင်ဖို့ လိုအပ်လှပါတယ်။ လူထုခေါင်းဆောင်ကို ၀န်းရံမှုဆိုတာဟာ ခေါင်းဆောင်နဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်တာ၊ အနီးကပ်တွေ့ဆုံ ဆက်သွယ်တာတွေကိုတင် ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခေါင်းဆောင် ကိုင်စွဲထားတဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့ ဦးတည်ချက်ကို တိုင်းပြည်အတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်တဲ့ လမ်းစဉ်၊ ဦးတည်ချက်၊ မိမိတို့ ယုံကြည်တဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်၊ ဦးတည်ချက်တို့နဲ့ ချိန်ထိုးလေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီး တူညီတဲ့ ဘုံလုပ်ငန်းစဉ်၊ ကွဲပြားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ခွဲခြားပြီးမှ လုပ်သင့်တာတွေကို လုပ်ဆောင်ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာမှ လိုအပ်ချက်အရ ချိတ်ဆက်ထိစပ်မှု၊ တာဝန်ခွဲဝေမှု၊ တွေ့ဆုံမှုဆိုတာတွေက ပါဝင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူရဲ့ လေ့လာချက်အရ လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ နိုင်ငံတော်အရေး ဦးတည်ချက်တွေမှာ အတွေးအခေါ် သုံးရပ်ကို အခြေခံထားပါတယ်။ ပထမတခုက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် သူမ ကိုင်စွဲထားတဲ့ လမ်းစဉ်က အကြမ်းမဖက်ရေး လမ်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယတခုက အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး (၀ါ) အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် သူမကိုင်စွဲတဲ့ လမ်းစဉ်က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာရေး (၀ါ)ဒိုင်ယာလော့ခ် ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယဦးတည်ချက်က ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်တခု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘက်ပေါင်းစုံက လမ်းစဉ်တွေ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အများအပြား ရှိပါတယ်။ တနိုင်တပိုင် ကိုယ်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့၊ စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်ကြရမှာပါ။ လူထုခေါင်းဆောင် စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ နယ်ပယ်ကတော့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ လူငယ်ထု စွမ်းအား တိုးတက်မြင့်မားရေး ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ နိုင်ငံတော်အရေး ဦးတည်ချက်တွေဟာ အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ တသားတည်း ကိုက်ညီနေတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို သန်းငါးဆယ်ကျော် လူဦးရေရှိနေတဲ့ တိုင်းပြည်တခုအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ဦးတည်ချက်တွေကို ခေါင်းဆောင် တယောက်တည်းက အကောင် အထည် မဖော်နိုင်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရေးကို လူထု ခေါင်းဆောင်က မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားလာအောင် လူထုခေါင်းဆောင်နဲ့အတူ လက်တွဲပြီး ပြည်သူတရပ်လုံးက ၀ိုင်းဝန်းတည်ဆောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို လူထုခေါင်းဆောင်က မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဖြစ်လာဖို့ လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ မြန်မာ တမျိုးသားလုံးက ကြိုးပမ်းကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ တဦး၊ တယောက်၊ တဖွဲ့တည်းက မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ မြန်မာတမျိုးသားလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ တို့နိုင်ငံ၊ တို့တိုင်းပြည်ကြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို အရင်းတည်ပြီးမှ ကျရာကဏ္ဍကနေ ၀ိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို တိုင်းပြည်ရဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ နိုင်ငံတော် အရေး ဦးတည်ချက်တွေကို ကိုင်စွဲထားတဲ့ လူထု ခေါင်းဆောင်ကို ၀န်းရံကြရာမှာလဲ လက်တွေ့ကျကျ ၀န်းရံနိုင်ကြဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားရေး
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ စနစ်တခုပါ။ စနစ်တခု ထွန်းကားလာဖို့ တည်ဆောက်ယူရပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ် အသွင်ကူးပြောင်းရေး(Democratization) ကို အကောင်အထည်ဖော်ကြရပါတယ်။ ဒီလို အကောင်အထည်ဖော်ကြရာမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် အဆင့်နှစ်ဆင့် ရှိပါတယ်။ ပထမတဆင့်က ကနဦး ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု (Initial Democratization) (သို့မဟုတ်) political liberalization အဆင့်ဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယအဆင့်က ဒီမိုကရေစီစနစ် အမြစ်တွယ် ခိုင်မာလာအောင် တည်ဆောက်ခြင်း (Democratic consolidation) ဖြစ်ပါတယ်။
တတိယလှိုင်း ဒီမိုကရေစီ လှိုင်းလုံးကြီးနဲ့ အတူ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများအပြားမှာ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးတွေ စတင်ခဲ့ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံကတော့ အာဏာရှင်စနစ်ကျင့်သုံးဆဲ နိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ကျန်ရစ်နေဆဲပါ။ စစ်အုပ်စုတို့က ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီး ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကို ဖော်ဆောင်မယ်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ပေမယ့် လက်တွေ့မှာ အာဏာရှင်ရွေးကောက်ပွဲ (authoritarian election) ကိုသာ ကျင်းပခဲ့တာကြောင့် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုရဲ့ ပထမအဆင့်ကို ဖော်ဆောင်ခြင်း မဟုတ်ပဲ ရွေးကောက်ခံ အာဏာရှင်စနစ် (electoral authoritarianism) ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုသာ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားရေးဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်ကို စနစ်တကျ ဖော်ဆောင်ဖို့အတွက် ကနဦး ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို ပထမအဆင့်အနေနဲ့ ဖြတ်သန်းပြီးမှ ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် အမြစ်တွယ်ခိုင်မာလာအောင် တည်ဆောက်မှု ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတာ ထင်ရှားလာပါတယ်။ ဒီလိုကနဦး ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု ဖြစ်ထွန်းလာရေးအတွက် အတိုက်အခံဦးဆောင်တဲ့ ကြားဖြတ်အစိုးရ (opposition-led provisional government)၊ ပါဝါခွဲဝေယူသော ကြားဖြတ်အစိုးရ (power-sharing interim government)နိုင်ငံတကာကြားဖြတ်အစိုးရ (international interim government) နဲ့ အာဏာရှင်ဦးဆောင် အိမ်စောင့်အစိုးရ (incumbent-led caretaker government) စတဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းကာလ ကြားဖြတ်အစိုးရ အသွင်တမျိုးမျိုး ပေါ်ထွက်လာရေးဟာလဲ လိုအပ်ချက်တရပ် ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီလို အသွင်ကူးပြောင်းကာလ ကြားဖြတ်အစိုးရ အသွင်တမျိုးမျိုး ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် လမ်းစဉ်တွေ၊ တွန်းအား (leverage) တွေ အများအပြား လိုအပ်ပါတယ်။ အညင်သာဆုံး ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှုလို့ ကမ္ဘာက သတ်မှတ်ခဲ့ရတဲ့ တောင်အာဖရိက ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု ဖြစ်စဉ်မှာတောင် normative leverage နဲ့ coercive leverage တွေကို အတိုက်အခံတွေဘက်က သုံးစွဲခဲ့ရပါတယ်။ normative leverage ကနေ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ နိုင်ငံတကာဖိအား တမျိုးတည်းနဲ့ မရပါဘူး။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်၊ လူထုတိုက်ပွဲလမ်းစဉ်တို့ ပေါင်းစပ်ပါဝင်တဲ့mass rolling actions တွေကို အသုံးပြုပြီး coercive leverageဖြစ်ထွန်းလာအောင် ဖော်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မြေပေါ်အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ စားပွဲပေါ်ရောက်နေတဲ့ လူထု ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း coercive leverage ကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့က ခဲယဉ်းကောင်း ခဲယဉ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာcoercive leverage ကို အကောင်အထည်ဖော်ရမယ့် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနေနဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ကို တိုက်ရိုက်ဝန်းရံပေးမှု မဟုတ်တဲ့ သွယ်ဝိုက်ဝန်းရံပေးမှုကို ပြုလုပ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။
နိုင်ငံတကာကြားဖြတ်အစိုးရကတော့ တရုတ်နဲ့ အနောက်အုပ်စုတွေအကြား တတိယကမ္ဘာစစ် မဖြစ်လာမချင်း ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိပါဘူး။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရဲ့ မဟာဗျူဟာအချက်အချာကျနေရာ ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လူသားချင်းစာနာမှုနှင့် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း (Humanitarian Intervention)ဖြစ်လာခဲ့ရင်တောင် တရုတ်တပ်၊ အိန္ဒိယတပ်၊ ပြင်သစ်တပ်၊ အမေရိကန်တပ်၊ ယူကေတပ်ပေါင်းစုံ ၀င်လာပြီး၊ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အချက်အချာ ဒေသတွေကို လုကြရင်း ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက် ကြေသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ရင်လဲ ကိုးရီးယားလို proxy war ဖြစ်ပြီး၊ မြောက်မြန်မာနဲ့ တောင်မြန်မာ ကွဲထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် Iraq Dilemma လို့ ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အမေရိကန်တပ်တွေ အီရတ်ကို ၀င်လာသလို ၀င်လာပြီး ဒီမိုကရေစီရအောင် လုပ်ပေးတော့မယောင်ယောင် စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တွေကို အမြစ်ကလှန်ပြီး ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ မလွဲမသွေ လိုအပ်လှပါတယ်။
အတိုက်အခံ ဦးဆောင်တဲ့ ကြားဖြတ်အစိုးရနဲ့ ပါဝါရှယ်ယာ ကြားဖြတ်အစိုးရတို့ဟာ coercive leverage နဲ့ normative leverage ကို ဟန်ချက်ညီ ပေါင်းစပ်အသုံးမပြုပဲ ပေါ်ထွက်လာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဆုံး တောင်အာဖရိကမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အာဏာရှင်ဦးဆောင်သော အိမ်စောင့်အစိုးရ(incumbent-led caretaker government) ကနေတဆင့် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှုမှာတောင် ၁၉၆၀ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Sharpeville Massacre၊ မင်ဒဲလားဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ military wing ဖြစ်တဲ့ Umkhonto we Sizwe (in Zulu means “Spear of the Nation”) ၊ ၁၉၇၆ ခုနှစ် The Soweto uprising၊ ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Mass Democratic Movement (MDM)စတဲ့ coercive leverage တွေက အခန်းကဏ္ဍတခုကနေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေဆဲကာလမှာတောင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး စားပွဲပေါ်မှာ de Klerk တို့ဘက်က သဘောထား ပျော့ပျောင်းတဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေကို ရွေးလာစေဖို့ တွန်းအားအနေနဲ့ လူထုတိုက်ပွဲတွေ ဆက်တိုက် ပေါ်ထွက်ပြီး coercive leverage ကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်ဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားရေးကို မြေပေါ်ပါတီအဖြစ် ရပ်တည်ရေး၊ အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှု၊ မြေအောက်ယူဂျီလှုပ်ရှားမှု၊ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး၊ လူထုတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှု စတဲ့ မိမိတို့အားသန်ရာ လမ်းစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖော်ဆောင်ပြီး လက်တွေ့ကျကျ ၀န်းရံကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု မရှိတာကြောင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးစတဲ့ ကဏ္ဍမျိုးစုံမှာ နှောင့်နှေးမှုတွေ ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေဆိုးတွေကို နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့ ကယ်တင်ရှင်ကသာ ကယ်တင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု ရှိလာဖို့အတွက် အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး (National Unity) ပါပဲ။ ဒီ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုလဲ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး (National Reconciliation) ကိုဖော်ဆောင်ပြီးမှ တည်ဆောက်ယူလို့ ရပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိုလဲ ဒိုင်ယာလော့ခ်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး ဖော်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေ၊ ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေး အင်အားစုတွေနဲ့ စစ်တပ် အကြားမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလေးတွေကအစ ညီလာခံကြီးတွေအထိ အဆင့်ဆင့်ကို ဖြတ်သန်းကြရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဖြစ်စဉ် (National Reconciliation Process)ထဲမှာ ကြိုးပမ်းမှု အဆင့်ဆင့်တွေ ကနေတဆင့် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကို အုတ်မြစ်ချနိုင်တဲ့ Highly Inclusive Dialogue ဖြစ်လာအောင် ဦးတည်ဆောင်ရွက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဒိုင်ယာလော့ခ်မျိုး ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ ဆိုတာက အသွင်ကူးပြောင်းကာလ ကြားဖြတ်အစိုးရ (Interim Government)အသွင်တမျိုးမျိုး မပေါ်ထွက်လာပဲနဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် အသွင်ကူးပြောင်းကာလ ကြားဖြတ်အစိုးရ အသွင်တမျိုးမျိုး ပေါ်ထွက်လာရေးဟာ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးအတွက်သာမက အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက်ပါ အရေးကြီးပါတယ်။
လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး (၀ါ)အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွေကို ၀န်းရံပေးမှုမှာ အသွင်ကူးပြောင်းကာလ ကြားဖြတ်အစိုးရ ပေါ်ထွက်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွေအပြင် အသွင်ကူးပြောင်းကာလ တရားမျှတမှု (transitional justice) ကို ဖော်ဆောင်နိုင်မှုအတွက် ကြိုတင်လေ့လာ ပြင်ဆင်ချက်တွေ၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ကော်မရှင် (National Unity and Reconciliation Commission) အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းရာမှာ လိုအပ်မယ့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်အတွက် capacity building လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ ပဋိပက္ခနှောင်းပိုင်းကာလ အခြေအနေ (post- conflict situations) မှာ ကြုံရနိုင်တဲ့ အခက်အခဲ စတာတွေကို ကြိုတင်လေ့လာချက်တွေ ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်တွေအကြားမှာ ပြုလုပ်တဲ့ Highly Inclusive Dialogue ဆိုတာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် အုတ်မြစ်တခုပဲ ဖြစ်ပြီး၊ ပဋိပက္ခတွေ ရဲ့ ဂယက်တွေကို ခါးစီးခံခဲ့ကြရတဲ့ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံး အကြားမှာ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးကို ဆက်လက်တည်ဆောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေတွေမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ၊ အမျိုးသမီးများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ၊ ဥပဒေ၀န်ထမ်းများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ၊ ပညာရှင်များရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ စပြီး လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ အများကြီး ရှိတာကြောင့် ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြေခံသဘောတရားတွေကို လူထုအကြားမှာ ပညာပေးဖြန့်ဖြူးမှုတွေ ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားဖို့လဲ လိုအပ်ပါတယ်။
ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတာကို ကောင်းမွန်သော ပြောင်းလဲမှုလို့ ပညာရှင် ချိန်ဘာစ် ဆိုသူက အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေ မြင့်မား လာတာ၊ ကျန်းမာရေး တိုးတက် ကောင်းမွန်လာတာ၊ ပညာရေးတိုးတက်မြင့်မားလာတာ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း တခုလုံးအတွက် အကျိုးရှိမယ့် အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိလာတာ စတာတွေ အားလုံးကို ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုတွေလို့ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတာမှာ ပညာရှင်တွေက အပိုင်းနှစ်ပိုင်း ထပ်ခွဲပြီး ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
လူသားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေအပေါ်မှာ အခြေတည်တဲ့ တိုးတက်မှုဆိုတာကတော့ ဒီလိုထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကနေ အစပျိုး စဉ်းစားတာ မဟုတ်ပဲ လူတွေနဲ့ လူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို စတင်စဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်။ လူသားလိုအပ်ချက်ကို အခြေပြုတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတာကို ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်တာ၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု ရာခိုင်နှုန်း မြင့်မားလာတာတွေလောက်နဲ့ပဲ တိုင်းတာလို့ မရပဲ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်းမှာရှိတဲ့ လူသားအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသင့်ကြောင်း ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတခုမှာ လူအများစုဟာ စားသောက်နေထိုင်ရေး လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ စွမ်းအားတွေ ရှိပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ်လက်မဲ့ ရာခိုင်နှုန်းတွေ နည်းနိုင်သမျှ နည်းပြီး လူသားတိုင်းမှာ တန်းတူညီမျှမှုရှိရပါမယ်။ နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဆိုရာမှာလဲ နိုင်ငံရေးအရရော၊ စီးပွားရေးအရရော ကိုယ့်ကြမ္မာ၊ ကိုယ်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပညာရေးအဆင့်အတန်းတွေလဲ တိုးတက်မြင့်မားပြီး အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ စစ်ပွဲတွေရဲ့ ဘေးဒဏ်ကနေ ကင်းဝေးတဲ့ လူ့ဘောင်သစ်ကို တည်ဆောက်နိုင်ရပါမယ်။ ဒီလို ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး၊ လူသားများရဲ့ လိုအပ်ချက်အပေါ်မှာ အခြေတည်တဲ့ တိုးတက်မှုတွေ ရှိလာဖို့အတွက် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူငယ်ထုစွမ်းအား တိုးတက်မြင့်မားရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ စာပေ၊ ဂီတအနုပညာ၊ အမျိုးသမီးအရေး စတဲ့ ကဏ္ဍမျိုးစုံမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အများအပြားရှိပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ တနိုင်တပိုင် ကျွမ်းကျင်ရာ ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်လဲ လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ နိုင်ငံရေး ဦးတည်ချက် တွေကို ၀န်းရံပေးရာ ရောက်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ဆိုရရင် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဦးတည်ချက်တွေလို့ လေ့လာတွေ့ရှိရတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ လက်တွေ့ကျကျ ကိုက်ညီတဲ့ ဦးတည်ချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဦးတည်ချက်တွေကို အောင်အောင်မြင်မြင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရေးအတွက် တူညီသော ဘုံလုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ မတူညီသော်လည်း လိုအပ်သော လမ်းစဉ်များဖြင့် အားဖြည့်ခြင်း၊ တိုင်းနိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်လေ့လာ ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အသိဥာဏ်ဗဟုသုတ ဖြန့်ဝေ ပညာပေးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြင့် လူထုခေါင်းဆောင်အား ၀န်းရံကြပါစို့ဟု ရေးသား တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။
Posted by Burma Democratic Concern at 01:47 Labels: Burma Democratic Concern (BDC) Diary
Wikileaks: Singapore says Myanmar's 'stupid'
13+14 December 2010 Diary by BDC at scribd
Burma Democratic Concern (BDC) Diary (14 Dec 2010)...